That's so good, right?: 2017
သူ့မညီမညာအ၀တ်အစားတွေကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း ချွတ်တော့ အမွှေးအမျှင်မရှိ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို တွေ့ရသလို အောက်ပိုင်း ဘောင်းဘီတွေ ကိုဖယ်ရှားပြန်တော့ ချက်ကနေ ဆီးစပ်အထိ အမွှေးအမျှင်တန်းလေးက ၅လက်မလောက်ရှိတဲ့ ခပ်ပျော့ပျော့ -ိင်တံတစ်ချောင်းမှာ အဆုံး သတ်ရော။ နောက် အိပ်ယာဆီ လှမ်းလာပြီးလှဲချလိုက်တယ် သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကိုလေ။ ကျွန်တော်ဘေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပေမဲ့ အကွာအဝေး က သိပ်မ ရှိ။ မွေ့ယာပေါ်ဝယ် ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း လှဲလျောင်းနေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော့်ဘေးမှာ အနီးကပ်တွေ့နေရသည်လေ။
အစတုန်းကကြောက်လန့်နေခဲ့တာ အသားကုန်၊ အခုတော့လည်း ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စိတ်တွေရင်ထဲ အပြည့်ပါ။ သူ့အသွင်အပြင်က အရမ်း ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းနေတာကြောင့်ရော အရမ်းဖြစ်ကာ ကျွန်တော့်ဘေးမှာလှဲလျောင်းနေတာ ကြည့်ရင်းနဲ့ ပေါင်ကြား က ညီဘွားက တဖြည်း ဖြည်းမာလာတယ်။ ဒီတော့လည်း ညာဘက်လက်ကလေးနှင့် အသာကိုင်ပြီး စတင်အလုပ်လုပ်ရ တော့တာ။ မြင်နေရတဲ့ကောင်ချောလေး ကလည်း ထို့အတူ သူ့ရွှေနီငှက်ပျောကို ကိုင်ရင်းဆွနေတာ ကြည့်နေရင်း ကြည့်နေ ရင်း မိုးပေါ်ထောင်လာက ၇လက်မနီးပါးရှည်လာပါ ရော။ ဒီ အချိန်ကြောက်စိတ်ဆိုတာကို လာမေးရင်တော့ ရင်ထဲမရှိ တော့ဘဲ အဲဒီနေရာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်မှုတွေက အစား ထိုးကာ သာသာယာယာပဲ သူ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်နေဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေက သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိကိုင်ဖို့ကြိုးစား ပေမဲ့ လေကိုသာထိုး ဖောက်သွားပါရော။
အလုပ်တွေပြီးဆုံးသွားတဲ့ သောကြာနေ့ညတစ်ညမှာ မြို့လေး ရဲ့တည်းခိုခန်းလေးဆီပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။အစဦးရောက်ခါစတုန်းကလို ရာသီဥတုမဆိုးတော့ဘဲ မျှတနေပါရဲ့။ ညစာစားဖို့ စား သောက်ခန်းထဲဝင်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဧည့်သည်နှစ်ဦးသည် လည်း ရောက်ရှိစား သောက်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အ ရာအားလုံးဟာ သာမန်အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်ကသာ သောက် ရူးအိပ်မက်တစ်ခုမက်ပြီးတော့ အချိန်တွေဖြုန်းသလိုဖြစ်နေတာ ဖြစ်မယ်။
ဒီတည်းခိုခန်းပတ်ဝန်းကျင်လေးက မဆိုးပါဘူး တော အုပ်လေးတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေတော့ အညောင်းအညာပြေ လမ်းလျှောက်လို့ရပါရော။ ကျွန်တော်တို့ ညစာစားသောက် ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ပြီး စကား စမြည် ပြော ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က အတော်အထာကျတဲ့သူ တွေပဲ။ gay စုံတွဲတစ်တွဲလို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တာပါ ဒါပေမဲ့ မသေချာပါဘူးလေ။ သူတို့တွေ ဘာကိုပြောဆိုနေကြမှန်း ကျွန်တော်အာရုံမစိုက်မိ။
'စိုးသူရ'ဆိုတဲ့ ဘဲက ကော်ဖီသောက် ပြီး နောက် သရဲ ခြောက်လှန့်ခြင်းအကြောင်း စကားစတင်ပါ ရော။၀ိညာဉ်တွေ၊ သရဲတွေအကြောင်း ပြီးတော့ သူတို့တွေနှင့် လူသားတွေ ထိတွေ့လို့ရမရ ကိစ္စတွေလည်းပါသေးတယ်။ ဒီ တည်းခိုခန်းကလည်း နည်းနည်းခြောက်တယ်လို့ သူကြား သတဲ့။ 'စိုးသူရ'သူငယ်ချင်း 'နေမင်း'က အဲဒါ ကိုကြားတော့ သ ဘောကျစွာရယ်ပါရဲ့ စိုးသူရ သူရဲကြောက်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြီး။ ကျွန်တော်ကလည်း ပြောပြတာ ပေါ့ ဒီတည်းခိုခန်း မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ လူသေမှုအကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့စားသောက် ပြီးတာတွေကို ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က လာသိမ်း တော့ အဲဒီ့ အကြောင်း မေးမြန်းဖြစ်ကြပါတယ်။ တည်းခိုခန်း ၀န်ထမ်းပြော တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာ တည်းခိုခန်းဆောက် လုပ်ပြီးခါစက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား လူငယ်နှစ်ယောက် လာတည်းရင်း အကြောင်းရှာမရ ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း၊ လူ တွေခြောက် လှန့်ခံရတယ် ပြောကြပေမဲ့ သူ့အနေနှင့် အခုထိ မမြင်ဖူးကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ နေမင်းက ဒါတည်းခိုသူတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့နည်း တစ်ခုလို့ ထင်ပါသတဲ့။
စကားစမြည်ပြောရင်း လက်ဆုံကျနေကြတာ နည်းနည်း ညဉ့် နက်လာမှ လမ်းခွဲပြီး ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပါလာတဲ့ စာအုပ်တွေကို အတန်ကြာဖတ်နေပြီးမှ မီးပိတ်လိုက် ကာ အလျင်အမြန်ပဲ အိပ်မောကျသွားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ် ကြိမ် နိုးလာတော့ အပြင်မှာ မှောင်နေတုန်းပါပဲ။ အလင်းစက် တွေက အရင်တစ်ခါပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ထောင့်စွန်းကနေ ခပ်ဖြည်း ဖြည်းပေါ်လာတယ်။ ကြောက်လန့် ရမယ့်အစား ကျွန်တော် ရင်ခုန်စွာဖြင့် ပေါ်ထွက်လာမယ့်သူကို ကြည့်နေမိတာ ပထမ အကြိမ်က တွေ့ဖူးရတဲ့ကောင်ချောလေးပေါ်လာပါ ရော။ အမွှေး အမျှင်မရှိ ချောမွတ်တဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အ၀တ်တစ်ခုမှမပါ ရွှေနီငှက်ပျောသီးကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ကျွန်တော်အိပ်နေရာဘေး ကို လျှောက်လှမ်းလာကာ ၀င်ပြီးလှဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်အစုံဟာ သူ့-ိင်တံရှိရာကို လှမ်းပြီး ကိုင်လိုက် ပေမဲ့ ဘာအထိ အတွေ့မှမရ။ ဒါပေမဲ့ မြင်နေရတဲ့ ကောင်ချော လေးရဲ့ -ီးနေရာကို အသာကိုင်ဟန်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပြီးကစား လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ ဘာဖီးလ်မှမရပေမဲ့ သူ့ ပစ္စည်းက ကျွန်တော်ပြုစုတာကို တုန့်ပြန်တာဖြင့် မာပြီး မိုးပေါ် ထောင်လာပါတော့တယ်။ ခပ်သွက်သွက် လက် ကိုလှုပ်ရှားပေး ဟန်ပြုနေတော့ သူ့ဗိုက်သားတွေ ရေပြင်အလား လှိုင်းထကာ လှုပ်လာတော့ ဒါသူ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ရိပ်မိပါ ပြီ။ မျက်စိကို အသာမှန် သူ့-ီးရှိရာကိုမှန်းကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ် အတွင်းထည့်လိုက်တာ ရုတ်တရက် -ီးတစ်ချောင်းပါးစပ်ထဲရှိ နေတာကို ခံစားလိုက်ရာပြီး လည်ချောင်းထဲသို့ ပျစ်ချွဲချွဲအရည် တွေ ရောက်ရှိတာကို ခံစားရပါ၏။ မျက်သန်းများကိုဖွင့် သူ့ မျက်နှာကိုကြည့်မယ် လုပ်တော့ မရှိတော့ သွားပြီ။
သူကျွန်တော့်-ီးကို အရင်းမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း -ိင်တံတ လျှောက် လျှာဖျားလေးနှင့်လျက်တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ကာ ဖီးလ်အရှိန်မြှင့်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ရွှေဥ တွေကို တစ်လုံးခြင်း ငုံစုပ်တော့တာ။ သူ့လှုပ်ရှားမှုမှာမြောနေ တဲ့ခဏ သူ့ဦးခေါင်းဟာ ကျွန်တော့် ခြေထောက်တွေကြားငုံ့ လျှိုးလာပြီးနောက် ခရေ၀ဆီလျှာဖျားလေးက ၀ိုက်ကာ ၀ိုက်ကာ ဖြင့်ခံစားမှုတွေ ဟိုးအမြင့်ဆီရောက်အောင် သူ လုပ်ပါပေါ့။ လျှာ ဖျားလေးကိုမာအောင်လုပ်ရင်း ခရေ၀ထဲ ဖိကာဖိကာဖြင့် တွန်း တာ.....အား.....ဘယ်လိုဖီးလ်မှန်းမပြောတတ်ဘူး။ ရုတ်တရက် သူထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကို ပခုံးပေါ်ထမ်း တင်လိုက်ရင်း ရွှေနီငှက်ပျောကြီးကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ဆီတေ့ ကာ နှဲ့သွင်းသွင်းပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်အခုအဖြစ်အပျက် ကို အိပ်မက်လို့ ထင်ရအောင်လည်း ခရေ၀က နာကျင်မှုက အစစ်အမှန် ခံစားနေရတာ။ တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ် ရင်း သူ့ဒစ်ကိုရှန်တိန်လုပ်ကာ အဆုံးထိသွင်းလိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်အောင့်ကနဲ ဖြစ် သွားရပါ၏။
ခပ်ဖြေးဖြေး သူအထုတ် အသွင်းလုပ်နေစဉ်မှာပဲ အခန်းထဲ အလင်းပိုမိုများလာပြီးနောက် ကျွန်တော့်မျက်နှာအနီး နောက်ထပ် ကောင်ချောလေးတစ်ပွေ အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်ထီး မာတောင်နေတဲ့ သူ့-ီးကိုကိုင်ရင်း ပေါ်ထွက်လာပြန်သည်။ သူ့ပစ္စည်းသွင်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော့်ပါးစပ် ကို အသာဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ရှည်လျားလှတဲ့ဟာကို အလိုက် သင့်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ တစ်ယောက်က လည် ချောင်းထဲ အထိ သွင်းချိန် နောက်တစ်ယောက်က ခရေ၀က အပြင်ကို ထုတ်တယ် အထုတ်အသွင်း တိုင်ပင်ကိုက်သလို သူတို့ အရှိန် မြှင့် နေကြတော့တာ။ ခဏနေတော့ သူတို့ပစ္စည်းတွေ ပိုမိုကြီး ထွားလာသလို ခံစားရပြီးနောက် ရွှေရည်တွေို့ သူတို့ထည့်သွင်း ထားတဲ့အ ပေါက်တွေထဲ တပြိုင်တည်းလိုလို ပန်းထည့်ကြပါ တော့တယ်။
Posted by Alex Aung at 12:47 PM No comments:
သူ ရောက်လာသောအချိန်သည် ဂျီဩမေတြီသချာင်္တစ်ပုဒ် အဖြေမထွက်၍ ကျွန်တော် ဦးနှောက်ခြောက်နေချိန်ဖြစ်သည်။ ခြံတံခါး ဖွင့်ဝင်လာသည်ကို ကျွန်တော်မသိလိုက်ပါ။ အိမ်တံခါးဝမှာ လာရပ်သည့်အရိပ်တစ်ခုက ကျွန်တော့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ပေါ် ထိုးကျ လာသောကြောင့်သာ ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော်လုံးဝမသိသော လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို မြင် လိုက်ရသည်။
သူ့ကို မြင်မြင်ချင်း မည်သူမဆို သတိထားမိနိုင်သည့်အချက်မှာ ဆံပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ အညိုရောင်ဆံပင်များ ရှည်လျားလှသည်။ တွန့်ခွေ လိမ်ကောက်ခြင်းမရှိ။ ပျော့ပျောင်းသော ဆံပင်များသည် ဖြောင့်စင်းလျက် ပခုံးပေါ်သို့မထိတထိကျနေသည်။ လေးထောင့် ကျကျ မေးစေ့တစ်ဝိုက်တွင် ရှည်လျားသော ပါးသိုင်းမွေး ခပ်ကျဲကျဲရှိသည်။ နှုတ်ခမ်းမွေးနှင့် မုတ်ဆိတ်အကြားမှာ သူ့နှုတ်ခမ်းသည် ဖျော့တော့သော မျဉ်းကွေးတစ်ကြောင်းသာ ဖြစ်၏။ ညိုမောင်းသော အသားအရေဖြင့် သူသည် ကျန်းမာတောင့်တင်းသော လူလတ် ပိုင်းအရွယ် ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ့မျက်လုံးများက နည်းနည်း ကျဉ်းမယောင်ရှိသော်လည်း နက်မှောင် တောက်ပ ၏။
အသံမှာ ခွန်အားအပြည့် ဝါညက်နေသည်။ ကျွန်တော်အားကျသော အသံမျိုးဖြစ်သည်။ ထိုအသံကြောင့်ပင် ခဲတံကို လက်မှချကာ ကုလားထိုင်မှ ထရပ်လိုက်၏။
သူသည် ကျွန်တော်ရှိရာသို့ တစ်လှမ်းချင်း နှေးကွေးစွာ လျှောက်လာသည်။ သူချဉ်းကပ်လာပုံမှာ ဧည့်သည်တစ်ယောက် အိမ် လည်လာပုံမျိုးမဟုတ်။ ဈေးဝယ်သူတစ်ယောက် သူဝယ်ရမည့် ပစ္စည်းအပေါ် စူးစိုက်တွက်ချက်ပြီး ချဉ်းကပ်လာပုံမျိုးဖြစ်သည်။ သူ့ကျောတွင် လွယ်ထားသော နက်ပြာရောင် အဝတ်ကျောပိုးအိတ်သည် ခပ်ဖောင်းဖောင်း အိတွဲနေသည်။
"ဟား လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀က ကျော်ဇံကလေးပါပဲလား"
သူသည် ကျွန်တော့ရှေ့က ဧည့်ခန်းစားပွဲပေါ်သို့ ကျောပိုးအိတ်ကို ဘုတ်ခနဲ ပစ်ချလိုက်ပြီး ကျွန်တော့ကို စေ့စေ့ကြည့်ပါသည်။
ကျွန်တော် စိတ်အားထက်သန်စွာမေးမိတော့ သူက ကျွန်တော့ခေါင်းကို ပုတ်၍ ခပ်ဟားဟား ရယ်မော၏။
သူက အသာအယာပုတ်လိုက်ဟန် ရှိသော်လည်း ကျွန်တော် နည်းနည်းနာသွားပါသည်။
"အသိပဲဆိုပါတော့ကွာ၊ ဒါက မင်း ငါ့နာမည် ကြားဖူးလား မကြားဖူးလားဆိုတဲ့ အဖြေပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့၊ မင်း ငါ့ကိုသိသလား"
ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်ပြီး ခေါင်းယမ်းပစ်လိုက်မည်ပြုပြီးမှ ခဏတွန့်ဆုတ်သွားပါသည်။ ထိုမျက်လုံးများကို ကျွန်တော် မြင်ဖူးသလိုပဲ။ ဘယ်မှာမြင်ဖူးမှန်း မသိပါ။ စူးရှသည့် မျက်လုံးမျိုး ။ ထို့ပြင် မထီလေးစား လှောင်ပြောင်လိုသော မျက်လုံးမျိုး။ အရာ ရာ ရယ်မောလိုသည့် မျက်လုံးမျိုး။
"မျိုးချစ်ဆိုတဲ့နာမည် မင်းအဖေပြောသံ ကြားဖူးလား"
ကျွန်တော် သူ့ကို တအံ့တဩကြည့်ပြီးနောက် စိတ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်လာသည်။
"ကျွန်တော်သိတယ်၊ ကျောင်းသိပ်လစ်တာပဲ ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်လား"
သူက ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်၏။ သူ့ရယ်သံသည် ကြမ်းတမ်းပွင့်လင်းသည်။ ကျွန်တော်မကြာခဏ ပုံဖော်ကြည့်ဖူးသော စိတ်ကူး ထဲက ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းသည် ယခုလို ဆံပင်ရှည်မရှိ၊ မုတ်ဆိတ် ပါးသိုင်းမွေးမရှိ။
"ဒီလိုဆိုတော့ ကျော်ဇံက ငါ့ကိုမမေ့ဘူးပေါ့"
သူ့အပြုံး ပျောက်သွားပြီး ကျွန်တော့ရှေ့က ကုလားထိုင်တွင် ခပ်လေးလေး ဝင်ထိုင်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါကျမှပင် ဧည့်သည်ကို "ထိုင်ပါ" ဟူသော စကားဖြင့် ဧည့်ဝတ်မကျေပွန်ခဲ့မှန်း သတိရသွားမိသည်။
"ထိုင်လေကွာ၊ မင်းနာမည်က ဘယ်သူတဲ့လဲ"
သူက လေတစ်ချက်ချွန်၍ ကျွန်တော့မျက်နှာကို စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်သည်။
"မင်းအဖေပေးတဲ့ နာမည်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မင်းအမေပေးတဲ့ နာမည်ပဲ ဖြစ်ရမယ်၊ ဟုတ်လား"
ကျွန်တော် သူ့စကားကို အဓိပ္ပာယ်မပေါက်နိုင်ဘဲ အနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွား၏။
"မသိဘူး၊ ဖေဖေ ပေးခဲ့သလား၊ မေမေ ပေးခဲ့သလား ကျွန်တော် တစ်ခါမှတောင် ထည့်မစဉ်းစားခဲ့မိပါဘူး"
သူက ခေါင်းတညိတ်ညိတ်လုပ်ကာ အိမ်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ဟိုဟိုသည်သည် မျက်စိဝေ့ဝဲ၍ ကြည့်နေသည်။
ကျွန်တော် အနည်းငယ် စိတ်ကျဉ်းကျပ်သွား၏။
"ဟုတ်လား၊ ငါ ဈေးဘက်က ဒီကိုလျှောက်လာရတာပဲ၊ ငါ မတွေ့ခဲ့မိဘူး၊ အေးလေ ငါတို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ချင်မှ တွေ့ခဲ့မှာပဲ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်မှတ်မိနိုင်ပါ့မလဲ၊ ဒီလောက် နှစ်တွေကြာနေတာ"
ကျွန်တော် သူ့ကို မျက်လွှာပင့်၍ ကြည့်မိသည်။
"ဖေဖေ့အကြောင်းတော့ ဦးလေး ဘာဖြစ်လို့ မမေးတာလဲ"
ထိုအခါ သူက ကျွန်တော့ပခုံးကို ခပ်ဖွဖွ (သို့သော် အင်အားအပြည့်ဖြင့်) ဖက်လိုက်သည်။
"သားရယ် မင်းအဖေ မနှစ်က ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ ငါ သတင်းကြားပြီးပါပြီ"
သူ၏ တိုးတိတ်သောအသံကြောင့် ကျွန်တော် ဗြုန်းခနဲ မျက်ရည်လည်လာသည်။ ကျွန်တော့ဖေဖေသည် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော ရှားပါးသည့် ယောကျာ်းတစ်ယောက် မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်တော့အတွက်တော့ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးဖွယ် ဖခင်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ ဖေဖေသည် သာမန် ကျောင်းဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားတွေအပေါ် စေတနာထားပြီး သူ့အလုပ်သူ တာဝန် ကျေသည်။ ကျောင်းဆရာဘဝကို တွယ်တာပြီး အခြားနည်းဖြင့် ငွေရှာဖို့ စိတ်မဝင်စားသူ ဖြစ်သည်။ မေမေကတော့ ဖေဖေ့အပေါ် မငြိုငြင်ခဲ့ပါ။
"မင်း မေမေ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေရဲ့လား"
"ဟုတ်ကဲ့၊ မေမေ ရုံးအလုပ်က ထွက်လိုက်တာ ကြာပြီ။ ဈေးရှေ့တိုက်တန်းမှာ ကုန်ခြောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်၊ ဖေဖေမဆုံးခင် ကတည်းကပဲ"
သူကကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ ပါလာသော ပစ္စည်းများကိုထုတ်၍ စားပွဲပေါ်တင်သည်။ မွေးပွမျက်နှာသုတ်ပဝါ၊ အိပ်ရာခင်းစောင်နှင့် ယောကျာ်းဝတ်ချည်ချောလုံချည် အသစ်စက်စက်အထုပ်များဖြစ်သည်။
"ဒါတွေ သိမ်းထားလိုက်ဦး၊ ညနေကျမှ ငါပြန်လာခဲ့မယ်"
ထို့နောက် သူ ဗြုန်းခနဲ ထိုင်ရာမှ ထလိုက်၏။
"ဦးလေးက ကျောင်းဆရာ မဟုတ်ဘူးနော်"
ကျွန်တော် ခေါင်းကို ခပ်ဖွဖွ ကုတ်လိုက်မိ၏။
"ဪ ကျွန်တော် သချာင်္တစ်ပုဒ် တွက်မရလို့"
ကျွန်တော့ဖွင့်လက်စ စာအုပ်ကို ငုံ့ကြည့်ပြီး သူက ပခုံးတွန့်လေသည်။
"မင်းအဖေနဲ့တော့ ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲကွာ၊ ငါ ဂျီဩမေတြီကို မသိတော့ဘူး၊ ငါသိတာက ဟန္ဒြိတ်၊ ပေ၊ လက်မနဲ့ ဈေးနှုန်းပဲ"
သူထွက်သွားသောအခါ ကျွန်တော် သူ့နောက်ကျောကို ငေးမော၍ ကျန်ခဲ့သည်။
"မေမေ သူ့ကို သိလား"
မေမေက မျက်နှာမှ သနပ်ခါးကို လက်ညှိုးကလေးဖြင့် ညှိရင်း ခပ်ဖွဖွပြုံး၏။
"သိသားပဲ၊ တစ်မြို့တည်းနေပြီး တစ်နှစ်တည်း ၁၀တန်းအောင်တဲ့လူ"
"သုံးယောက် အတူတူလား မေမေ"
မေမေက ကျွန်တော့ကို မျက်ခုံးပင့်ကြည့်သည်။
"သုံးယောက် မဟုတ်ဘူးလေ နှစ်ယောက်၊ အဲဒီ ကိုမျိုးချစ်က မင်းဖေဖေရဲ့ သူငယ်ချင်းပဲ၊ သူတို့နှစ်ယောက် အလယ်တန်းကျောင်း သားဘဝတည်းက မကွေးကောလိပ်ရောက်တဲ့အထိ တွဲခဲ့ကြတာ"
"မေမေက မကွေးကောလိပ်ရောက်မှ သူတို့နဲ့ခင်တာလေ၊ အင်း မေမေက သားဖေဖေနဲ့ပဲ ပိုပြီးရင်းနှီးခဲ့တာပဲ၊ သူ့ကိုတော့ မေမေ သုံးလေးခါပဲ စကားပြောဖူးတယ်၊ အခုမြင်ရင်မှတ်မိမယ်မထင်ဘူး၊ သူက တစ်မျိုးပဲ"
ဘယ်လို တစ်မျိုးလဲဟု ကျွန်တော်က မမေးရသေးမီ မေမေက ဆက်ပြောသည်။
"မျက်နှာကြော တင်းက တင်းနဲ့၊ မိန်းကလေးတွေကိုလည်း သိပ် ဂရုစိုက်ဟန်မတူပါဘူး"
မေမေ့ကိုရော သူ ဂရုစိုက်ခဲ့ဘူးလား၊ ထိုစကားကို ကျွန်တော် မမေးပါ။
ဟိုတုန်းကတော့ မေမေဟာ သိပ်လှတာပဲလို့ ကျွန်တော်တွေးမိသည်။ အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာ မေမေ ငယ်စဉ်က ဓာတ်ပုံတွေ ကျွန်တော် တွေ့ရသည်။ ဖေဖေ့ဓာတ်ပုံကတော့ နည်း၏။ ဖေဖေက ရှက်တတ်သည်။ အေးဆေးသိမ်မွေ့သည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကိုတော့ အလွန် ပင် ရှက်သည်ဟု မေမေပြောဖူးပါသည်။ မင်္ဂလာပွဲမှာရိုက်သည့် ဓာတ်ပုံမှတစ်ပါး ဖေဖေနှင့်မေမေ နှစ်ယောက်တွဲ ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဖူးပါ။ သို့သော် ဖေဖေနှင့် သိပ်ခင်သည်ဆိုသော ဖေဖေ့ သူငယ်ချင်း ဦးမျိုးချစ်နှင့် တွဲရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ဖေဖေ့ဆီမှာ ရှိသည်။ ဖေဖေတို့ ၁၀တန်း နှစ်တုန်းက ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဖေဖေသည် နုနယ်ပျိုမျစ်စွာ ပြုံးရယ်လျက်ရှိသည်။ ယခု ပြန်စဉ်းစားတော့ ဓာတ်ပုံထဲက ဦးမျိုးချစ်သည် မဟုတ်မခံစိတ်ဖြင့် အရာရာကို အလေးအနက်ထားပုံရလျက် မနက်က ဦးမျိုးချစ် ကတော့ အရာရာကို မကျေမနပ် လှောင်ပြောင်သရော်လိုဟန် မျက်နှာပေးရှိသည်။ ဓာတ်ပုံနှင့် လူအကြား ကွဲပြားခြားနား ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကြောင့် ကွဲပြားခြားနားခြင်းလား ကျွန်တော် မဝေခွဲတတ်ပါ။
"သူ ဘယ်မှာ တည်းတယ်လို့ သားကို ပြောသွားသေးလား"
"ဟင့်အင်း၊ မပြောဘူး မေမေ"
သူ ကျွန်တော့ကို ဘာမှ ပြောမသွားခဲ့ပါ။
"သူက ဒီမြို့မှာ အိမ်မရှိဘူးလား မေမေ"
"မရှိဘူးထင်တာပဲ သားရဲ့၊ သူ့မှာ အဖေ အမေတော့ မရှိဘူး၊ သူ့ဦးလေးနဲ့ နေတာလို့ ကိုကျော်ဇံပြောခဲ့ဖူးတာပဲ၊ အခု အဲဒီဦးလေး ရှိလား မရှိလား မေမေ မသိဘူးလေ၊ ရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သာ ဒီမြို့ကို သူတစ်ခေါက်မှ မရောက်လာတာပေါ့"
ကျွန်တော် အလွန်သိချင်နေသည့် မေးခွန်းကို မေမေ့အား မေးလိုက်မိသည်။
"ဒါဖြင့် သူက အခု ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲ"
မေမေက ကျွန်တော့ကို မျက်လုံးပြူး၍ ပြုံးပြ၏။
"ဟောတော် မေမေ ဘယ့်နှယ်လုပ်ပြီး သိမလဲ၊ မေမေနဲ့မှ မတွေ့လိုက်ရတာ၊ သားက မမေးလိုက်ဘူးလား"
မေမေသည် စဉ်းစားသလို ငြိမ်သက် တွေဝေသွားသည်။ မေမေ့ နဖူးဆံစပ်မှာ ဘယ်လိုမှ ဖြီးသင်၍မရသော ဆံယဉ်စကလေးများ ဝဲလွင့်လျက်ရှိသည်။ နဖူးမှာ အရေးအကြောင်းများ ပေါ်လွင်စ ပြုလာသော်လည်း မျက်လုံးမျက်ခုံးကတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလို တောက်ပ မြဲဖြစ်သည်။ လူကြီးပီသစွာ ဣနြေ္ဒရရုံ ပြည့်ပြီး သွယ်လျနေသည့် မျက်နှာပြင်တွင် အသားအရေ လျော့ရဲမှု၊ ညိုညစ်မှု လုံးဝ မရှိ။
"ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေမေ ဟင်းကလေး ဘာလေးတော့ ထပ်လုပ်လိုက်ဦးမှ ဖြစ်မယ်"
မေမေ မီးဖိုခန်းထဲ ဝင်သွားတော့ ကျွန်တော်သည် ဧည့်ခန်းမှာ ခပ်ငိုင်ငိုင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
မေမေဟာ လှနေတုန်းပဲ။ ဤအချက်မှာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်သော အချက်ဖြစ်သည်။ မေမေ့ကို မုဆိုးမ လူလွတ်အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အဖြစ် ယခုမှ မြင်မိသောကြောင့် ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိသည်။ ဦးမျိုးချစ်ဟာ ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းတဲ့။ ဖေဖေရှိစဉ်တုန်းက တစ်ခါမှ မလာဘဲနဲ့ အခု ဖေဖေဆုံးမှ၊ ဆုံးသွားတာလည်း သိရဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လာတာလဲ။
ဖေဖေ့ထံမှတစ်ဆင့် မျိုးချစ်ဟူသော လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း မကြာခဏ ကြားဖူးပါသည်။ ကျောင်းစာကလွဲပြီး အားလုံး ကို နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်သူ ဟူသော အချက်ဖြင့်ပင် မျိုးချစ်သည် ကျွန်တော့ အိပ်မက်တွေထဲမှာ ဇာတ်လိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘိုကေကို နောက်ပြန် လှန်ဖြီးထားပြီး ကျွန်တော့ကို မထီတရီကြည့်နေသည့် ဓာတ်ပုံထဲက မျက်လုံးများကို ကျွန်တော် အားကျပါသည်။ ဓာတ်ပုံ ထဲမှာ ဖေဖေ၏ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အပြုံးနှင့် မျိုးချစ်၏ရိုင်းစိုင်းကြမ်းရှသော အကြည့်ကို ယှဉ်ကြည့်မိတိုင်း ကျွန်တော်သည် ယောကျာ်းတစ်ယောက်၏ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းမှုကို ဘယ်လိုမှ သဘောမကျနိုင်ကြောင်း သေချာလာခဲ့သည်။ ယောကျာ်းတစ်ယောက် သည် ဗီဇသဘာဝအားဖြင့် ကြမ်းတမ်းရမည်၊ ခွန်အားပြည့်ရမည်၊ ပါးနပ် လျင်မြန်ရမည်။ လိုအပ်လျှင် ဘာမဆို ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ယူ တတ်ရမည်။
တစ်ခါတုန်းက မြစ်ရေကြီးချိန် ကမ်းနားမှာ ရေဆင်းချိုးရင်း ဖေဖေ ရေနစ်သွားသောအခါ မျိုးချစ်က ဖေဖေ့ကို ကယ်ဆယ်ခဲ့ရသည် တဲ့။ မျိုးချစ်သည် ငါးတစ်ကောင်လို ရေကူးကျွမ်းကျင်သည်ဟု ဖေဖေပြောခဲ့ပါသည်။
ဖေဖေ့ကို သူရဲကောင်း ဖြစ်စေချင်သော ကျွန်တော်က အားမလို အားမရ မေးမိတော့ ဖေဖေက ထုံးစံအတိုင်း နူးညံ့စွာ ပြုံးလေသည်။
"မကူးတတ်ဘူး၊ ဖေဖေက ကုန်းမြင့်မှာ ကြီးပြင်းရတဲ့လူ၊ မျိုးချစ်က ကမ်းနားမှာ ကြီးပြင်းရတဲ့ လူလေ"
"ဒါပေမယ့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ရေကူးတတ်ဖို့တော့ ကောင်းပါတယ် ဖေဖေရာ"
ဖေဖေက ကျွန်တော့ကို စိုးရိမ် ထိတ်လန့်စွာ ကြည့်သည်။
"သား မြစ်ထဲချောင်းထဲ ရေသွားကူးဖူးသလား၊ ဖေဖေတို့ မသိအောင် ဘယ်တုန်းကများ သွားကူးလိုက်သလဲ"
"မပူပါနဲ့ ဖေဖေ၊ ကျွန်တော် ရေကူးကျွမ်းကျင်နေပါပြီ"
မေမေက ကျွန်တော်တို့ သားအဖကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ အကဲခတ်နားထောင်ရင်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရယ်မောခဲ့ဖူးလေသည်။
ကျွန်တော်တို့မြို့ သဲသောင်ခုံ၏ တစ်ဖက်ရှိ ကျွန်းပေါ်က ရွာကလေးသို့ လေသေနတ်တစ်လက်ဖြင့် ခါတွေ ချိုးတွေ လိုက်ပစ်တတ် သူမှာ မျိုးချစ်။ သောင်ပြင်ပေါ် ရေလျှံစဉ် ကမ်းနားမှာ ကျောက်ချသလို ထိုင်လျက် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ငါးမျှားသူမှာလည်း မျိုးချစ်။ ဖေဖေကတော့ ငါးကလေးတွေ၊ ချိုးကလေးတွေကို သနားသည်ဟုဆိုကာ မျိုးချစ် မီးကင်ကျွေးသမျှ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်တဲ့။ ထိုအခါ ကျောင်းလစ်ပြီး ထိုကျွန်းပေါ်သို့ အုပ်စုလိုက်သွားကာ ပြောင်းခင်းတွေထဲ ခိုးဝင်၊ ပြောင်းဖူးတွေ ချိုး၊ ဆီးသီးတွေ ဆွတ်၊ ကမ်းနားမှာ တပျော်တပါး ငါးမျှားခဲ့ဖူးသည့် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်အကြောင်း ဖေဖေ့ကို မပြောဘဲ ထားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အတန်းထဲမှာ စာတော်ပြီး နူးညံ့ချောမောသော ဖေဖေ့ကို မနာလိုစိတ်ဖြင့် ခပ်ရမ်းရမ်းကောင်တွေက ကျောင်းအလာမှာ စောင့်ပြီး ရန်စစဉ် ဖေဖေ့ကိုယ်စား အားလုံးကို ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း တိုက်ခိုက်ကာ ဖေဖေ့ကို ကာကွယ်ခဲ့ရသော မျိုးချစ်ကို ညတစ်ညမှာတော့ အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြဖူးသည်ဟု ဖေဖေပြောပြဖူးပါသည်။
"ဖေဖေတို့ အချင်းချင်းရော ရန်မဖြစ်ဘူးလား ဟင်"
ဖေဖေက ချက်ချင်း မဖြေဘဲ ခဏစဉ်းစားနေပြီးမှ ခပ်တိုးတိုး ဖြေသည်။
အဓိကကျသော မေးခွန်းကို ကျွန်တော် မေးတော့ ဖေဖေက ခပ်မဲ့မဲ့ ပြုံး၏။
"တစ်ခါက သူနိုင်တယ်၊ တစ်ခါက ဖေဖေနိုင်တယ်"
ဖေဖေ ဘယ်လိုနည်းဖြင့် သူ့ကိုနိုင်သလဲဟု ဖေဖေ၏ ကျစ်လျစ် သွယ်လျသော ကိုယ်ခန္ဓာကို ကြည့်၍ စပ်စုမိသောအခါမှာတော့ ဖေဖေ့မျက်နှာ တည်ကြည်သွားပြီး စကားလွှဲပစ်ခဲ့ပါသည်။
မေမေ့မျက်နှာမှာ ဖေဖေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရွှင်လန်းတောက်ပလျက် ရှိသည်ကို စိတ်မကောင်းစွာ ကျွန်တော်ရိပ်မိနေ၏။ မေမေ့မျက်နှာ အမြဲတမ်း ကြည်နူးချမ်းမြေ့နေစေချင်သော်လည်း ယခုလို ရွယ်တူ သူစိမ်းယောက်ျား တစ်ယောက်၏ စကားတွေကြောင့်တော့ မေမေ မရွှင်လန်းစေချင်ပါ။
“ဘယ်သွားသွား အတူတူပဲ ဆိုပါတော့၊ ခင်များအဆောင်ကို သူလာနေကျ ညနေတွေက လွဲလို့ပေါ့ဗျာ”
မေမေ့မျက်နှာမှာ ရှက်စနိုး အပြုံးလေးတစ်ခု နူးညံ့စွာ ပေါ်လာသည်။
“ဟုတ်တယ်နော်၊ ရှင်ဘယ်တော့မှ ပါမလာဘူး”
သူမျက်နှာ နည်းနည်း မှုန်သွား၏။
“ကျွန်တော်က အဲလို ပလီပလာကိစ္စတွေကို စိတ်မရှည်ဘူးဗျ၊ သူ ခင်များအဆောင် သွားနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်က ဘော်လုံးချည်း ဖိကန်နေခဲ့တယ်လေ၊ အဲဒီရက်တွေ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့သလဲဆို ကျွန်တော် အတန်းလိုက် ချန်ပီယံတစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့ အထိပါပဲ”
သူ့ရယ်မောသံမှာ ကြမ်းတမ်းသော်လည်း ပူနွေးသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ ကျွန်တော်၏စိတ်ကူး အိပ်မက်ထဲမှ သူရဲကောင်းသည် တဖြည်းဖြည်း မှိန်ဝါးနေပြီ ဖြစ်သည်။
“ဦးလေးမှာ အိမ်ထောင် မရှိဘူးလား”
ကျွန်တော်သည် ရိုင်းပျစွာပင် သူ့စကားကို နှောင့်ယှက်လိုက်မိ၏။ မေမေ့မျက်နှာက ဘာမှ မထူးခြားသော်လည်း သူက ကျွန်တော့ကို စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်ကာ မထီတထီ ပြုံးလေသည်။
လျင်မြန်သောအဖြေက တုံးတိတိ ဖြစ်နေသည်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော ဖေဖေသာ စာပွဲဝိုင်းတွင် ရှိခဲ့လျှင် ကျွန်တော်၏ရိုင်းပျမှုကို မနှစ်မြို့သလို လှမ်းကြည့်တော့မှာ သေချာသည်။
မေမေကတော့ ကျွန်တော်၏ စကားဖြတ်မှုအတွက် နည်းနည်းမျှ အံ့သြပုံမရ။
“ဒါနဲ့ မခင်မူ … အကူအညီလိုရင်ပြောနော်၊ ကျွန်တော့်ကိုဘာမှ အားနာစရာ မလိုဘူး၊ ကျွန်တော့်လိပ်စာ ခင်ဗျားတို့ကို ပေးခဲ့မယ်၊ လိုအပ်ရင် ဆက်သွယ်ဖို့”
မေမေက ဘာမှ မဖြေရသေးမီ ကျွန်တော်က ရုတ်တရက်ငြင်းပစ်လိုက်မိသည်။
“ကိစ္စမရှိဘူး ဦးလေး၊ ကျွန်တော်တို့သားအမိ ပြည့်စုံပါတယ်၊ ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့”
ကျွန်တော်နှင့်သူ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အကြာကြီး စူးစိုက်ကြည့်နေကြ၏။ သူကလည်း တော်တော်နှင့် မျက်နှာမလွှဲ၊ ကျွန်တော်လည်း အရှုံးမပေးဘဲ စိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်။ မေမေက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို သဘောကျသလို ပြုံးကြည့်နေ၏။ နောက်ဆုံးတော့ သူက လျှော့ပေးရသည်။ သူက နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းကလေး ကွေး၍ ပြုံးကာ ခေါင်းတစ်ချက်ဆတ်လိုက်သည်။
“အိုကေ . . . ကျွန်တော် ပြန်မယ်၊ မနက်ဖြန်ညနေလောက်မှ လာခဲ့ဦးမယ်”
ပြောပြောဆိုဆို သူထိုင်ရာက ထလိုက်သည်၊ မြင့်မားတောင့်တင်းသော သူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ကြမ်းတမ်းသော သူ့မျက်နှာကို အားကျစွာ ကျွန်တော် မော့ကြည့်မိခိုက်မှာပင် သူ့မျက်လုံးများ မေမေ့ဆီ ရောက်နေသောကြောင့် ကျွန်တော် မျက်ခနဲ အောင့်သွားရ၏။ သို့သော် သူပြန်တော့မည့်အတွက် ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါသည်။ မေမေကစားပွဲမှထရပ်သည်။ သူ့ကိုတံခါးပေါက်ဝထိ လိုက်ပို့ပေးတော့မည်လားဟု ကျွန်တော်ထင်လိုက်၏။ ကျွန်တော်ကမန်းကတန်း မတ်တပ်ထရပ်လိုက်သည်။
“ရတယ်မေမေ၊ မေမေနေခဲ့၊ ကျွန်တော် ဦးလေးကို ခြံဝိုင်းအပြင်ထိ လိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်”
မေမေက ကျွန်တော့်မျက်နှာအရိပ်အကဲကို ဖေဖေ့ထက် ကျွမ်းကျင်စွာ ဖတ်တတ်သည်။
“အေးကွယ်၊ ဒါဆို မေမေပန်းကန်တွေ ဆေးလိုက်ဦးမယ်”
သူက ဘောင်းဘီအိတ်တွေထဲလက်ထည့်ကာ ကျွန်တော့်စကားကြောင့် ဘာမှ ထူးခြားမသွားသလိုပင် အိမ်ထဲမှ ဖြည်းလေးစွာ ထွက်သွားသည်။ ကျွန်တော်သည် သူ၏နောက်နားမှ ကပ်လျက် တိတ်ဆိတ်စွာ လိုက်ပါသွားမိ၏။ ခြံဝန်းထဲမှာတော့ လရောင် ရွှမ်းလက်စပြုပြီ။ မြင့်မားသော အုန်းလက်များ လေဖြင့်လှုပ်ခတ်နေသည်ကို သူမော့ကြည့်လိုက်၏။ ထို့နောက် သူ့နောက်ကျောနား နီးကပ်နေသော ကျွန်တော့်ဘက်သို့ ဗြုန်းကနဲ လှည့်ကြည့်သည်။ သူ့အရပ်နှင့် ကျွန်တော့်အရပ် သိပ်မကွာသော်လည်း သူ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ် အုပ်မိုးနေသလို ခံစားလိုက်ရသည်။
“ငါဒီနေ့ အိမ်ရောက်သွားတော့ ရှိသမျှ သေတ္တာတွေဘီရိုတွေကို ရောင်းပစ်ဖို့တစ်အိမ်လုံး ရှင်းလင်းပစ်လိုက်တယ်။ ထင်းရူးသေတ္တာဟောင်းထဲမှာ တခြားစာအုပ်တွေနဲ့အတူ ကျော်ဇံရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်တွေ့တယ်၊ ဆယ်တန်းနှစ်တုန်းက စာအုပ်၊ သိပ်လှတဲ့လက်ရေးတွေ မင်းသိမ်းထားချင်မလားလို့”
ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ရင်း တစ်ကိုယ်လုံးနွမ်းခွေလာသည်။ ဖေဖေလက်ရေးသည် အမြဲလှခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်ဘာမှမဖြေနိုင်မီ သူက ဂျာကင်အကျီ င်္နောက်ကျောကိုမကာ ခါးကြားထိုးထားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ထုတ်ယူ၍ ကျွန်တော့်ကို ကမ်းပေးသည်။ ကျွန်တော်အနည်းငယ် တုန်ရင်သောလက်များဖြင့် လှမ်းကိုင်လိုက်၏။
“ငါ ၁၀တန်းတုန်းက လူရိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံတက်ရတယ်၊ ငါကျောင်းပျက်တုန်း ကျော်ဇံ ငါလွတ်သွားတဲ့ သင်ခန်းစာအားလုံးကို အဲ့ဒီ့စာအုပ်ထဲမှာ ရောကူးပေးခဲ့တယ်”
“သချာင်္ရော၊ ဓါာတုရော၊ ဘိုင်အိုရော အစုံပဲ”
ကျွန်တော်သည် သေသပ်စွာအဖုံးဖုံးထားသော မှတ်စုစာအုပ်ကလေးကို လရောင်ဖြင့် သဲကွဲစွာ မမြင်နိုင်ဘဲ စာရွက်တွေလှန်ကြည့်မိသည်။ စက္ကူဟောင်းနံ့နှင့်ရောလျက် ပရုတ်လုံးနံ့သင်းသင်းကလေးမွှေးနေသည်။
ကျွန်တော် ရုတ်တရက် အာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာ၏။
“ဒါနဲ့ မင်း မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ဖူးပြီလား”
မမျှော်လင့်သော မေးခွန်းကြောင့် ကျွန်တော် သူ့ကို ဆက်ကနဲ မော့ကြည့်လိုက်မိသည်။ သူက ကျွန်တော့် စိတ်ကို ထွင်းဖောက်တော့မလို သဲသဲမဲမဲ စိုက်ကြည့်နေသောအခါ ကျွန်တော်မလုံမလဲ ဖြစ်သွားပါသည်။ ခင်ဗျားနှင့် ဘာဆိုင်လို့လဲဟု ကျွန်တော်ရိုင်းပြချင်သော်လဲ၊ ကျွန်တော် တိတ်ဆိတ်စွာပင် ခေါင်းငြိမ့်လိုက်မိ၏။
“အင်း… ဒါလဲ ကျော်ဇံအတိုင်းပါပဲလား”
ထို့နောက် ကျွန်တော့်ဆံပင်များကို ညင်သာစွာဖွပြီး ပြန်သပ်ပေးသည်။ သူ့လက်ကိုင်တွယ်ပုံမှာ မထင်မှတ်ပဲ နူးညံ့သိမ်မွေ့လွန်းသောကြောင့် ကျွန်တော် ကြက်သီးဖျန်းကနဲထသွားခါ စိတ်မှတ်မဲ့ နောက်ဆုတ်ရပ်လိုက်မိ၏။ သူက ချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲပစ်လိုက်သည်။
ခဏကြောင်သွားပြီးမှ ဖေဖေ့သချို င်္င်းကို ဆိုလိုကြောင်းသိသွားပါသည်။
ကျွန်တော့်အသံက ဆို့နင့် ထစ်အ သွားသည်။ ဖေဖေ့အသုဘ မြေချသောနေ့က ပူပန်သောကသည် ကျွန်တော့်ထံ ယခင်ခံစားမှုအတိုင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့သည်။ ၄၃နှစ်ဆိုတာ အလွန်ငယ်ရွယ်သေးသည့် အသက်ဖြစ်ပါသည်။
“အိမ်က အသုဘလဲ ကျောင်းကုန်းမှာချမှာပဲ”
သူ့စကားကြောင့် ဆက်ကနဲတုန်သွားသည့်ကျွန်တော့်ကို သူက သဘောကျသွားသလိုပင် ခေါင်းတစ်ချက် ညိတ်သည်။
“ငါ့ ဦးလေး ဆုံးသွားပြီလေ၊ မနက်ဖြန် သဂြို င်္ဟ်မယ်၊ ဦးလေးသာမသေသေးရင် ငါဒီမြို့ ကိုရောက်ဖြစ်ဦးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါနဲ့ သူ့မြေပုံက ဘယ်နားလောက်မှာလဲ”
ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်း စုံစမ်းသလို ခပ်ပေါ့ပေါ့မေးသောမေးခွန်းကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ စူးစူးရှရှ နာကျင်ဝမ်းနည်းသွားပါသည်၊ ဝေ့ဝဲလာသောမျက်ရည်များကြောင့် မျက်လွှာချပစ်လိုက်မိသည်။
“မြေပုံမဟုတ်ဘူး၊ အုတ်ဂူ၊ ဇရပ်ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်မှာ”
ကျွန်တော့်အသံ မာထန်သွားသည်ကို သူလုံးဝ ဂရုမစိုက်ပဲ ချာကနဲ လှည့်ထွက်သွား၏။
နေသည် အနောက်ဘက်ကောင်းကင်မှာ မြင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ခြံထဲမှ ခူးလာသော နှင်းဆီပန်းများရှိသည်။ အကယ်၍ အမှန်တကယ်သူ့ဦးလေး၏ အသုဘရှိနေပြီး သူနှင့် မတော်တဆတွေ့သွားလျှင် ဖေဖေ့အုတ်ဂူမှာ ပန်းလာချပြီး ကန်တော့ဖို့လာသည်ဟု အကြောင်းပြနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ညနေ မိုးချုပ်သည်အထိ သူ့ဦးလေး၏ အသုဘဆိုတာမရှိလျှင် သူလိမ်ညာနေကြောင်း မေမေ့ကို ပြန်ပြောပြမည်။
သို့သော် ကျွန်တော် သဿာန်သို့ရောက်သွားသောအခါ အသုဘတစ်ခု အမှန်တကယ်ရှိနေပြီး မြေဖို့နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လူအနည်းငယ်သာကျန်တော့သော သချို င်္င်းမြေသည် ဖုန်ထူလွှမ်းလျက် ဝမ်းနည်းခြောက်ခြားဖွယ်ရာ တိတ်ဆိတ်နေ၏။
ကျွန်တော်သည် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာမြေဖို့နေသော လူစုထဲ၌ ထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေသော သူ့ကို မြင်လျှင်မြင်ချင်း ကန္တာရပင်တစ်ပင်၏ ပင်စည်ဖြင့် ပုန်းကွယ်ရန်ကြိုးစားမိ၏။ သို့သော် အသုဘကြောင့် ပူပင်သောက လုံးဝရှိဟန်မတူသော သူက ကျွန်တော့်ကိုမြင်သွားကာ လက်မြှောက်ပြ၏။ ထို့ကြောင့် သူရှိရာသို့ ဖြေးညင်းတွန့်ဆုတ်စွာ လျှောက်သွားရပါသည်။
“လာ… မင်းရောက်လာမယ်လို့ ငါသိနေတယ်”
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတစ်ယောက် အကြာကြီး စူးစိုက်ကြည့်နေမိကြသည်။ သည်တစ်ခါ မျက်နှာစလွှဲရသူက ကျွန်တော်ဖြစ်ပါသည်။
ဖေဖေအုတ်ဂူရှေ့ မှာ ရပ်မိကြတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဘာစကားမှ မပြောနိုင်ကြပဲ ငြိမ်သက်နေသည်။ နေရောင်ဖျော့ဖျော့သည် ထနောင်းပင်အကိုင်းအဖျားမှ ဖြတ်လျှက် ဖေဖေ့အုတ်ဂူပေါ်သို့ ပျောက်တိပျောက်ကျား ကျရောက်နေသည်။ ကျွန်တော်ယူလာသည့် နှင်းဆီပန်းများကို အုတ်ဂူပေါ် တင်မည့်ဟန်ပြင်ခိုက် သူက ခဏလက်ပြတားသည်။ အုတ်ဂူခေါင်းရင်းမှာ တင်နေသော သစ်ရွက်ခြောက်များ၊ မြေမှုန့်များကို လေနှင့်မှုတ်၍ဖယ်ပေးသည်။ ထို့နောက်… “ဦးကျော်ဇံ၊ အသက် ၄၃-နှစ်၊” ဟူသော ထွင်းစာထင်ရှားလာသည်အထိ သူ့လက်ညှိုးထိပ်ဖြင့် ခပ်ဖွဖွ ပွတ်သပ် ခြစ်နေပါသည်။
အုတ်ဂူပေါ် ပန်းများတင်လိုက်ပြီးသောအခါ ကျွန်တော် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကန်တော့လိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့် နှဖူးနှင့် အေးစက်သော အုတ်ဂူအစွန်းထိတွေ့မိပြီးသောအခါ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက တစ်စုံတစ်ရာကို တင်းခနဲဆွဲယူ ဆုပ်ညှစ်ခံလိုက်ရသလို နာကျင်သွားလျှက် မျက်ရည်များ ပြည့်လျှံလာသည်။
ကျွန်တော် အံကျိတ်လျှက် အုတ်ဂူစွန်းပေါ် နှဖူးမှေးတင်ကာ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရသည်အထိ ထိန်းချုပ်ငြိမ်သက်နေစဉ် သူက ဘေးမှာ မလှုပ်မယှက် ရပ်နေခဲ့သည်။
“ငါနဲ့ကျော်ဇံ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက်က ဒီသချို င်္င်းထဲမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကို ဖက်ပြီးငိုဖူးတယ်”
ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကို မေ့သွားပြီး ဆတ်ခနဲခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်တော့ သူကျွန်တော့်ကိုကြည့်မနေပါ။
“မင်းအဘွားဆုံးတုန်းကပေါ့၊ ကျော်ဇံ့အမေလေ၊ ကျော်ဇံက ဆယ့်သုံးနှစ် ငါက ဆယ့်လေးနှစ်၊ ဟော… ဟိုနေရာလောက်မှာ မင်းအဘွားရဲ့မြေပုံ ရှိခဲ့ဖူးတယ်”
ကျွန်တော်သည် လက်ညှိုးညွှန်ပြရာ ကုန်းမို့လေးဆီသို့ လှမ်းကြည့်ဖြည်းညှင်းစွာ မတ်တတ်ရပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကို လက်ခုံဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာ ပွတ်သုတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။
“ကျော်ဇံဆုံးတုန်းက မင်းဘေးမှာ မင်းနဲ့အတူ ဝမ်းနည်းမယ့် သူငယ်ချင်းမရှိဘူး မဟုတ်လား”
ကျွန်တော် ကြောင်အစွာပင် ခေါင်းခါရမ်းလိုက်၏။
“ဆိုးတာပဲ၊ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘဝမှာအရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းဆိုတာရှိသင့်တယ်”
ကျွန်တော့်မှာသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးပါဟု ပြန်ပြောချင်သော်လည်း မပြောနိုင်ပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်တော့်မှာ ကောင်းတူဆိုးဖက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းသော သူငယ်ချင်းမရှိပါ။ ပြိုင်ဘက်များသာရှိပါသည်။
“အင်း… ပြီးကာမှ ဒေါသတကြီး ရန်ဖြစ်ပြီး နှစ် ၂၀ လောက် အဆက်အသွယ်ပြတ်ချင် ပြတ်ပလေ့စေပေါ့လေ”
သူက စကားကို ပြန်ဆက်ပြီး ခပ်ဟပ်ဟပ် ရယ်မောသည်။ ရယ်မောသံမှာခြောက်သွေ့အက်ကွဲ၏။
လေသည် ကျွန်တော်တို့ဆီသို့ ဖုန်ငွေ့နှင့်မကျည်းရွက်ခြောက်များကို သယ်လာသည်။ ဟိုး အဝေးဆီမှာ ဥသြငှက်တစ်ကောင် ဆွဲဆွဲငင်ငင် အော်မြည်နေသည်။ ကျွန်တော်ဖေဖေ့ကို လွမ်းဆွတ်စိတ်ဖြင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆုပ်ကိုင်မိ၏။
“ဖေဖေ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြစမ်းပါ ဦးလေး”
“ကျော်ဇံနဲ့ ငါ နှစ်ခါရန်ဖြစ်ဖူးတယ်”
ဖေဖေတစ်ခါတုန်းက ပြောဖူးတဲ့စကားအတိုင်း ပါပဲ။
အဓိကကျသော အချက်ကိုပင် ဖေဖေ့တုန်းကလို ကျွန်တော်မေးမိပါသည်။ သူ့အဖြေက ဖေဖေ့အဖြေထက် ပို၍ ပြည့်စုံပါသည်။
“ပထမတစ်ခါ ၉ တန်းနှစ်ကပေါ့၊ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးသတ်ကြတာ၊ ကောင်မလေးနာမည်ကို ငါမေ့သွားပြီ၊ အဲ… မဟုတ်ဘူး၊ ကောင်မလေးနာမည်ကို ကောင်းကောင်းတောင် မသိခဲ့ပါဘူး၊ ငါ ကျော်ဇံကိုလက်သီးနဲ့ တစ်ချက် ထိုးပစ်လိုက်တယ်”
ကျွန်တော်သည် ကိုယ်တိုင် အထိုးခံလိုက်ရသလို ဆတ်ခနဲ နာကျင်သွားသည်။
“နောက်တစ်ခါဆို မင်းနဲ့ငါအပြတ်ပဲလို့ သူ့ကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်၊ သူကောင်မလေးနဲ့ တစ်ခါတည်းပြတ်သွားတယ်၊ စာတစ်ခုပဲ သူအာရုံစိုက်တော့တယ်၊ အဲ့ဒါ သူ့အတွက်သိပ်ကောင်းပါတယ်၊ အင်း … ငါက ဒီကောင်ငါ့ကို ဖြုံသွားပြီလို့ အောက်မေ့ခဲ့မိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကောလိပ်တတိယနှစ်ရောက်တော့ နောက်တစ်ကြိမ်း ရန်ဖြစ်ရပြန်တယ်၊ ဒီတစ်ခါ မင်းအမေ မခင်မူကြောင့်ပေါ့ကွာ”
ကျွန်တော်သူ့မျက်လုံးများကို စူးစူးရှရှ အကဲခတ်ကြည့်မိသည်။
“ငါဘယ်လောက်ပဲ ဒေါသကြီးကြီး၊ ဆဲဆဲဆိုဆို၊ ကျော်ဇံကလုံးဝနောက်မဆုတ်တော့ဘူး၊ နောက်ဆုံးတော့ ရုံးမှာသွားလက်ထပ်မယ့်ညက ငါ့ကို အသိသက်သေလုပ်ပေးဖို့ လာပြောတယ်”
သူ ခပ်သဲ့သဲ့ ရယ်၏။ ရယ်သည်ကို နှုတ်ခမ်းအရသာသိရသော်လည်း သူ့ရယ်သံကို ကျွန်တော်မကြားရပါ။
“ငါ သူ့ကို ဆွဲထိုးပစ်လိုက်တယ်၊ သူကငါ့ကို ပြန်ထိုးတယ်၊ ဘယ်လောက်အံ့သြဖို့ကောင်းလည်း၊ ဘယ်တုန်းကမှ လူတစ်ယောက်ကို လက်သီးနဲ့ မထိုးဖူးတဲ့ ကျော်ဇံက ငါ့ကို ထိုးတယ်ကွာ၊ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ်၊ မင်းသိပ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ကောင် . . . တဲ့၊ မင်းလိုအရူးကောင်းကို ငါမပေါင်းချင်တော့ဘူးတဲ့”
“ငါ့ကို အရူးလို့ပြောပြော၊ ဘာပြောပြော၊ ငါမနာပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ကောင်လို့ သူ့ပါးစပ်ကပြောလိုက်တော့ ငါဝမ်းနည်းတယ်၊ ငါ့ဘဝမှာ ဒီသူငယ်ချင်းပဲ အရေးအကြီးဆုံး၊ အရင်းနှီးဆုံး၊ အခင်မင်ဆုံး၊ ငါလုပ်သမျှ ငါအသက်ရှင်သမျှ သူ့အတွက်ချည်းပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် သိပ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ကောင်လို့ ငါစွပ်စွဲခံခဲ့ရတယ်၊ အဲ့ဒီနေ့ကစပြီး ငါတို့ခြင်း မတွေ့ကြတာ သေတဲ့အထိပေါ့”
ပတ်ဝန်းကျင်သည် တဖြည်းဖြည်းအမှောင်ရိပ်လွှမ်းလာလေသည်။ လေထုသည် အေးစက်သိပ်သည်းလာသည်။ အနောက်ဘက်ကောင်းကင်တွင် နေရောင် လုံးဝပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီ။
သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး၊ တစ်ခုခုတော့ ပြောချင်နေသည်။ သို့သော် မပြောဘဲထားတာ ပိုကောင်းမည်ဟု ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။
နှစ်သိမ့်သလို ခပ်စစ ပြောလိုက်မိသောအခါ ပြုံး၍ ခေါင်းငြိမ့်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး မည်းမှောင်လာသည်အထိ ဖေဖေ့အုတ်ဂူဘေးတွင် ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေခဲ့ကြသည်။
(၁၉၉၃၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ နှင်းဆီမဂ္ဂဇင်း)
Posted by Alex Aung at 4:28 PM No comments:
လိင်တံ မာကျောလာစေတဲ့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး
ရေးသားသူ - Dr . Phyu Mon Latt
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ - Dr. K Zin Thwe.
လိင်တံထောင်မတ်ခြင်းဆိုတာလိင်တံသည်သွေးဖြင့် ပြည့်တဲ့အခါ မာကြောပြီးထောင်မတ်လာခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် မာကျောခြင်းနဲ့ လိင်တံထောင်မတ်တဲ့ ကြာချိန်ဟာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ယောက်ျားပီသတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံစားရမှုနဲ့ သူ့ရဲ့ လိင်မှုဘဝမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတို့နဲ့ ဆက်သွယ်နေပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံစဉ် လိင်တံထောင်မတ်မှုရဲ့ အရည်အသွေးကိုတိုးတက်ဖို့ အောက်ဖေါ်ပြပါ ရိုးစင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လိင်တံထောင်မတ်ခြင်းဟာသင့်ရဲ့ ကျန်းမာတဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ်နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် နှလုံးအစရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ ယေဘုယျကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာသင့်နှလုံးကိုပိုခုန်စေပြီးတော့ လိင်တံအပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တိုင်းကိုသွေးရောက်မှုမြင့်တက်စေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကျန်းမာရေးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေသာမကလိင်တံဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းဟာလိင်တံထောင်မတ်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ –
တင်ပဆုံလေ့ကျင့်ခန်း – တင်ပဆုံလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာသင့်ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့အတူတင်ပဆုံကြွက်သားတွေကိုပိုမိုသန်စွမ်းစေပါတယ်။ အားအင်ပြည့်ဝတဲ့ အရိုးကြွက်သားတွေကြောင့် သင်ဟာအကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့ အမာကြောဆုံးလိင်တံထောင်မတ်မှုကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
တဘက်အသုံးပြု၍လေ့ကျင့်ခြင်း – အလယ်အလတ်အရွယ်အစားရှိတဘက်ကိုကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ လိင်တံကိုမာကျောအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာသင့်ရဲ့ အရွတ်တွေကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
လိင်တံလေ့ကျင့်ခန်း – တဘက်နဲ့ လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ယှဉ်ရင် လိင်တံကိုညှစ်ပေးရသောဒီလေ့ကျင့်ခန်း (milking motion)ဟာအခြားကိရိယာတွေ မလိုတဲ့အတွက် ပိုမိုရိုးရှင်းပါတယ်။ သို့သော်လည်းဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာသင့်လိင်တံကိုသွားတဲ့ အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့သွေးစီးဆင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
သင့်လိင်တံမာကျောဖို့အတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ အစားအသောက်နဲ့ အရည်တွေကိုသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီး – ငှက်ပျောသီးမှာ နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ ပိုတက်စီရမ် အများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့နှလုံးဟာကျန်းမာတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလိင်တံထောင်မတ်မှုကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။
စပ်သောငရုတ်ကောင်း – ငရုတ်ကောင်းမှာပါတဲ့ capsaicin ဟာအပူကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးသွေးကြောတွေအတွက် ကောင်းကျိုးရှိကာလိင်တံကိုသွားတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကိုအားပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာလိင်တံထောင်မတ်ဖို့ အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
ကွေကာအုပ်အမှုန့် -ကွေကာအုပ်အမှုန့် တင်မကပဲအခြားအမျှင်ဓါတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ သွေးတွင်းအဆီပမာဏကိုကျဆင်းစေပြီးလိင်တံကိုသွေးရောက်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
ကမာကောင် – ကမာကောင်တွေမှာဇင့်ဓါတ်နဲ့ ဗီတာမင် ဘီ၆ ပါဝင်ပြီးယောက်ျားဟော်မုန်းကိုအမြင့်ဆုံးပမာဏထိထွက်စေဖို့ အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမာကောင်တွေဟာစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လိင်မှုဘဝနဲ့ လိင်တံထောင်မတ်မှုဖြစ်စေဖို့အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဆာမွန်ငါး – အိုမီဂါ ၃ ပါဝင်တာကြောင့် ဆာမွန်ငါးတွေဟာသင်သွေးခဲစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်နဲ့ သင့်လိင်တံအားဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးအစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဝိုင်အနီ – ဝိုင်အနီကိုသင့်တင့်ရုံသောက်သုံးခြင်းဟာသင့်သွေးကြောတွေကိုအနားပေးပြီး၊ သွေးလည်ပတ်မှုကိုချောမွေ့စေပါတယ်။
ကော်ဖီ – လိင်တံထောင်မတ်မှုအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကော်ဖီကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။ ကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့ ကဖင်းဓါတ်ဟာသင့်သွေးလှည့်ပတ်မှု စနစ်အတွက် အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။
ဆေးလိပ်နှင့် အရက်ဖြတ်ခြင်း – မာကျောတဲ့ လိင်တံကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်ကိုအခုပဲရပ်လိုက်ပါ။ ဒီအကျင့်တွေဟာသင့်ကိုပျော့တဲ့ လိင်ကိုသာပေးပါလိမ့်မယ်။
အခြားတစ်ဖက်က ကြည့်ရင်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဖိအားတွေဟာဘယ်တော့မှ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်သင်ဟာအနားယူပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုတတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချသင့်ပါတယ်။ ၎င်းက သင့်ရဲ့ လိင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေပါလိမ့်မယ်။ သင်ပိုမိုအနားရလေလေသင့်ရဲ့ လိင်တံကပိုမိုထောင်မတ်ပြီးအားပြည့်လေဆိုတာမမေ့သင့်ပါဘူး။
လိင်မှုဘဝဆိုတာပုံမှန်ဖြစ်ပြီးသဘာဝကျတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကသင့်ကိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ လိင်တံထောင်မတ်မှု အားနည်းခြင်းအတွက် သင့်ဆရာဝင်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးသင့်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
Credit: Hello SayarWon Page
'ဒေါင် ဒေါင်' ဆိုတဲ့ ဒီဇင်ဘာရဲ့ ခေါင်းလောင်းသံချိုတွေ ပြန် လည်မြည်ဟည်းလာပြန်ပါပေါ့။
နှင်းစက်လေးတွေ ခေါင်မိုးကို တစ်ဖျောက်ဖျောက်ထိခတ်နေသံ ကို ခပ်သဲ့သဲ့ကြားနေရသည်လေ။
ရာသီဥတုရဲ့အေးမြမှုတွေကြားမှာ ကျွန်တော်တကိုယ်ရည် အေးစက်စွာ နွေးထွေးမှုကင်းမဲ့နေတာ ကျွန်တော့်စိတ်ရဲ့ ရူးသွပ်မှုတစ်ခု သက်သက်ပဲလား၊ 'အတွေးလွန်မှုလေးသာ'ဆိုတာများလား။
'လူဆိုတာ အချစ်နဲ့မကင်းဘူး တစ်ယောက်ယောက်နဲ့မင်း ချစ်တမ်းကစားလိုက်ရင် အေးစက်နေတဲ့ မင်းစိတ် ကိုယ်ခန္ဓာ အလိုလိုနွေးထွေးသက်ဝင်လာမည်'တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးကပြောပြပါရဲ့။
မင်းမသိလို့ပါ......ကိုယ်ဟာ ရင်ခုန်သံများစွာအောက်မှာ တစ်ကိုယ်ရည် အထီးကျန်နေတယ်....ကွာ။
'ရာသီဥတုကအေးလိုက်တာနော် ဘေဘီ၊ မင်းဒီလိုဆောင်းရာသီကို ကြိုက်လား၊ကိုယ်တော့ နွေဦးရာသီကို ပိုရင်ခုန်တယ်'
ဟင့်အင်ဗျာ.....ကျွန်တော်ဒီလိုဆောင်းဦးရာသီရဲ့အေးမြလတ်ဆတ်မှုကိုပိုသဘောကျတယ်' လို့ သူ့ကိုနှုတ်ကဖွင့် မပြောဖြစ် ပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ အမှန်တကယ် ဒီလိုဒီဇင်ဘာလရဲ့ ဆောင်းနှင်းပွင့်တွေကို သဘော ကျပါသည်။
ရာသီဥတုကအေးတယ် တစ်ယောက် တည်းနေတတ်သူတွေအတွက် သိပ်အဆင် မပြေဘူးလို့ ဆိုကြပေမယ့် ကျွန်တော့် အတွက်ကတော့ ရင်ခုန် သံလေးတွေအစီအရီဆိုတော့ နွေးထွေးရာရင်ခွင်က အသင့်။
သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို လေးလေးကန်ကန်ချရင်း ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ရယ်ချင်သလိုလို အလန့်တကြားလိုလိုပင် ဖြစ်သွား မိသည်။ နောက် ပြီး ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒီလောက် ထိန့်လန့် တုန်လှုပ်သွားရမှန်းကိုလည်း ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ ပြန်တွေး ကြည့်လို့မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေမိ၏။
'ဘာကိုလည်း ဘာကိုထိတ်လန့်သွားသလဲ?'ဆိုရင် ကျွန်တော့် လက်ဖ၀ါးကို သူ့ရဲ့နွေးထွေးတဲ့လက်နဲ့ အုပ်မိုး ကိုင်တွယ် ရင်း 'Honey' လို့ခေါ်လိုက်သံကြောင့်ပေါ့။ သူ့ရင်ထဲကလာတဲ့ ဒီအသံဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ရင်ခုန် သံပြင်းထန်သွား စေသလို ထိန့်လန့်သွားစေခဲ့တာ လေအေးအေးလေးတွေတိုက်နေတဲ့ အင်းယားကန်ဘောင်က ဘူးသီးကြော်ဆိုင်လေးမှာပါ။
ဒီဇင်ဘာရဲ့ ခေါင်းလောင်းသံချိုလေးတွေကို သူ့တိုက်ခန်းလေးကနေ ကြားနေရပါတယ်။ ဒီလိုညချမ်းမှာ အိမ်တိုင်းလိုလို ဒါမှ မဟုတ် ရင်နှီးခင်မင်ရာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ အိမ်တွေမှာ 'ကောင်းချီး မင်္ဂလာရောက်စေသော်' ဆိုတဲ့ သံစဉ်လေးတွေ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကြားရတယ်။ သူလည်းအိမ်ကိုလာမည့် သူ့မိတ်ဆွေတွေ အတွက် စားစရာတွေပြင်ဆင်နေသလို ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်အကြိုက်သံပုရာရည်လေး တွေဖျော်ရင်း ပြီးတော့ မကြိုက်သူတွေအတွက် ကော်ဖီရဖို့ ကော်ဖီကျိုတဲ့စက်လေး နဲ့ပြင်ဆင်ပေးရင် ကူညီပျော်ရွှင်ရပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မြူးကြွနေတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ရတာ ကျွန်တော်ပါရောယောင် ပျော်ရွှင်မိရပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့တော့ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ ရာသီ ဖြစ်ပေ မဲ့ ဂီတဆိုတဲ့ သံစဉ်တွေနောက်ကျွန်တော်နစ်မြောမိရပါ့။ သူငယ်ချင်းတွေ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့်လက်ရာ သံပရာရည်ချိုချဉ် လေးရယ် ကော်ဖီလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ ကို နှစ်သက်ချီးကျူးတော့ သူကဂုဏ်ယူစွာဖြင့် 'ဒါငါ့ချစ်သူဖျော် ထားတာ'တဲ့။ တော်ပါသေးရဲ့ သဘောထားပွင့်လင်းပြီး အမြင်ကျယ်တဲ့လုပ်ငန်း သဘာဝ မှာကျင်လည် နေကြသူများမို့ ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကို မထူးဆန်းသယောင်လက်ခံပျော်ရွှင်ပေး ကြပါတယ်။
မြို့ထဲသွားလာရာ ဈေးဝယ်ရာ၊ Night Club တွေသွားတာ စသဖြင့်သူကျင်လည်လှုပ်ရှားရာတိုင်းမှာ ကျွန်တော် မပါမ ဖြစ်ပါ။ ခပ်ချောချော နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘေးမှာ မြန်မာချွတ်တားလေးက ကပ်ပါနေတာဆိုတော့ လူတွေက တစ်မျိုးတစ်မည်စူးစမ်းမျက်ဝန်းတွေနဲ့ ကြည့်နေသလားပဲ။ ကျေတော့ ကျေနပ်မိပါတယ်...ကျွန်တော် ဟာသူ့အတွက် အပျော်အဖော်အဆင့်ထက်ပိုပြီး နေရာပေးခံရတယ်၊ အချစ်ခံ ရတယ်လို့ပေါ့။
ကျွန်တော်သူ့ကိုရင်ခုန်မိသလား....နှစ်သက်မိတာတော့အမှန်ပါ။ ပညာအရမ်းတော်တယ် ဒါဟာဦးစားပေးအချက်ဖြစ်မိ တယ် ထင်ရဲ့၊ သူတစ်ပါးနိုင်ငံမှာ လာအလုပ်လုပ်တယ် လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတတ်တယ် ဒါဟာ ဒုတိယ အချက်၊ ဦးစားပေးတယ် တကယ့်ကို ချစ်ခင်လှိုက်လှဲစွာဖြင့် သူ့ မေတ္တာတွေကို ရယူစေတယ် ဒါဟာ တတိယ အချက်၊ နောက် ဆုံးသူဟာ နှစ်လိုဖွယ်အပြုံးနဲ့ ရုပ်ရည်ချောမော သူဖြစ်နေ တယ် အဲဒါဟာလည်း...။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရာသီစက်ဝန်းလည်ပတ်နေသလို လောကသဘာဝ အလုပ်သဘာဝတွေအတိုင်း သူ့အလုပ်ဟာ စာချုပ်သက်တမ်း စေ့လာသလို ကျွန်တော်သိနေတာက ကျွန်တော်တို့ ချစ်စာချုပ် သက်တမ်းလည်း သက်တမ်းစေ့ဖို့နီးစပ်လာပြီပေါ့နော်။ အဲဒီအ ကြောင်းလေးကို သိဖူး မြင်ဖူး နှင်းစက်တွေနှင့်ပြန်လည်ထိတွေ့ရတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးမှာ ကျွန်တော်တိတိကျကျ သိခဲ့ရတာကြောင့် ရင်ထဲ အသည်းထဲ ပူလောင်တဲ့ချောကလက်ရည်တွေ လောင်းထည့်လိုက်သလို ခံစားရတာများ အခုပဲ နွေရာသီ ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာ။
'ကိုယ်မင်းကို ပြန်လာခေါ်မယ် မင်းစောင့်နေရမယ်နော်'
'မင်းကို ကိုယ်တကယ်ချစ်ပါတယ် အမြဲတမ်းအတွက်'
လေထဲမှာလွင့်မျောနေတဲ့တိမ်တိုက်တစ်ခု ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ မျောချင်ရာမျော ဖမ်းဆုပ်ထားမယ့်သူမရှိ လေအလာ အတိုင်းမျောရသူပေါ့။လေဆိပ်ကပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် ကျွန်တော်...ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းဆိုတာ တွေးမိတာ သာမဟုတ် လက်တွေ့ခံစားရပြီပေါ့လေ။
'ဒီဇင်ဘာရယ် အလွမ်းမိုးစက်တွေ ငါ့ရင်ထဲသည်းစေတယ်'တဲ့ သီချင်းသံလေးက ဆောင်းဘောက်စ်က တစ်ဆင့်နားထဲဝင် ရောက်လာရပေါ့။ လူတကာအားကျတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်ဇာတ်လမ်း ဆောင်းနှင်းစက်တွေနဲ့ အတူခေါင်မိုးပေါ် တဖျောက် ဖျောက်....။
'အဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့ လိုရာခရီးကိုရောက်ရှိပါစေ ချစ်သူရေ'
စောင့်နေဖို့ဆိုတာထက် သူတကယ်ရောပြန်လာမှာလား... .ပြန်လာမှာလားဗျာ။
ပြူတင်းပေါက်က လှမ်းအကြည့် ခြံဝင်းထဲမှာ သူ့အကြိုက် တရုတ်စကားဖြူပန်းပွင့်တွေ မွှေးကြူနေပြီ...။
တိတ်ဆိတ်နေသောအခန်းအတွင်း ကျွန်တော်၏ အသက်ရှူ သံမှလွဲ၍ ဘာသံကိုမှမကြားရ။ပွင့်နေသော ကုတင်ဘေးမှ ပြူတင်းပေါက်က လေတဟူးဟူးဝင်နေသည်။ ကျွန်တော်က နံရံပေါ်မှ မီးခလုတ်များကို လက်ဖြင့်စမ်းရင်း ဖွင့်လိုက်၏။ ထိုစဉ် ကျွန်တော်၏ ဘယ်ဘက် အင်္ကျီအိပ်ကပ်အောက်မှာ နှလုံးခုန်သံ က တဒုတ်ဒုတ်ဖြင့် လှုပ်ခါသွားသည်ကို သတိ ပြုမိလိုက်သည်။
ရေချိုးခန်းနံရံပေါ်က မှန်ချပ်ရှိရာဆီ ခပ်သွက်သွက်သွားပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာဟာ ပန်းသွေးရောင် ထနေပြီး မျက်ဝန်းများဟာ မအေးစက်တော့တာကို အံ့အား သင့်ဖွင့်မြင်လိုက်ရသည်။
'မင်းမမှတ်သေးဘူးလား.....နောက်တစ်ခါမင်းကျန်ခဲ့မှာကို မစဉ်းစားမိဘူးလား ကောင်လေး'လို့ မှန်တဲ့ကပုံရိပ်ကို တိုးတိုး သက်သာ ကျွန်တော်ပြောမိရသည်။
တစ်ယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်နေတတ်သည့် ကျွန်တော့် အတွက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က 'ခင်မင်ဖို့ကောင်းသည့် အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်ရှိတယ် သူနဲ့စကားပြောကြည့်'ဆိုကာ ဂျီမေးလ်အကောင့်တစ်ခုကိုပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန် တော့်ငြိမ် သက်နှလုံးသားဟာ တဆတ်ဆတ်ပြန်လည် ခုန်လာတာ သိပ် တော့မထူးဆန်းဘူးလို့ပြောရင်ရမလားဘဲ။
ရေပန်းအောက်ကိုအသာဝင် ရေတွေတဖွားဖွားကျလာအောင် ဖွင့်လိုက်မိရင်း ရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်မိသည်။
'ညီရေကို မလိုအပ်ရင်ပိတ်ထား၊ လိုအပ်သလောက်သာသုံး' ဆို တဲ့ သူ့စကားကိုကြားယောင်မိလိုက်လို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
သူဟာ ပြင်သစ်ပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းလုပ်ငန်းခွင်မှာ ပညာရှင် တစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရည်ကမြန်မာမဆန်ဘဲ အနောက်တိုင်းရုပ်ပေါက်နေသည်။ စတင်တွေ့ဆုံမိတဲ့နေ့တန်းကဆို လူကြားထဲ ထင်းနေသည့်သူ့ ရုပ်ရည်နဲ့ အရပ်အမြင့်ကြောင့် ဟုတ်ပါ့ ဟုတ်ပါ့မလား လို့ သံသယ၀င်မိသေးသည်။
'ဒါ သူပြောပိုင်ခွင့်ရှိလို့သာပြောနေတာလေ တကယ်ယုတ္တိ မရှိဘူး'
'ဒါအမှန်ဘဲ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ကာလာမသုတ်ထဲမှာ ဟောကြား ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ညီသိတယ်မလား'
ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံဆုံရတဲ့အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ပြောဆိုတိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့အခါ ရှင်းလင်းသွား အောင် အဓိပ္ပာယ် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ရှင်းပြနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ သာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ ကိုလည်း ဖြေဆို အောင်မြင်ထားသူ ဆိုတော့ အမြင်မကြည်တာတွေကို လင်းသွား အောင်ထွန်းညှိပေးနိုင်သူပါ။
တစ်စစနဲ့ ကျွန်တော်သူ့ကိုတွယ်ညှိလာတာများ မယုံနိုင်စရာ ပါ။ သူနဲ့ခွဲရမှာကြောက်လို့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ သည်းသည်း လှုပ်ငို ရှိုက်မိရတာ သုံးကြိမ်လောက်ရှိမလားဘဲ။ အစ်ကိုလို အဖေလို ပြီးတော့ချစ်သူတစ်ယောက်လို အရာရာ ပြည့်စုံ အောင် မေတ္တာ ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ 'အစ်ကို' ပါ။
လောကဆိုတာဘာတွေများလဲ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လိုလူမျိုးတွေမှာ အချစ်ဆိုတာ တကယ်အသုံးဝင် ရဲ့လား။ 'ရင်ထဲစူးစူးနစ်နစ် ခံစားမိတာပဲဖြစ်ဖြစ် မခံစားရတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်နိုင်တယ်လို့ မယူဆကြဘူးလား' ဆိုတာတွေးမိရပါပြီ။ လက်ထပ်လို့လည်းမရ၊ ကိုယ့်ကိုသာချစ်ပါလို့ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် လည်း မရှိ...အို.....ဘာမှပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိ အရိပ်နဲ့အငွေ့ကိုသာ ဖမ်းဆုပ်တွယ်ငြိနေမိသူ သက်သက်ပါဆိုတာ ကျွန်တော် ဟော ဒီလိုဆောင်းတွင်းညချမ်း တစ်ခုမှာ သိလိုက်ရ ပြန်ပါသည်။
'နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ညီ မလေးရှားကပြန်လာမယ်၊ ကိုယ်နဲ့အတူနေမယ်ကွ၊ သူအပြင်သွားတဲ့ရက်တွေမှာမှ တွေ့ရအောင်နော်'
'သူကသာ ငါ့ရည်းစား ငါ့ချစ်သူပဲ ၊ မင်းကိုပြောပြပြီးခဲ့ပြီလေ ကိုယ်တို့ဇာတ်လမ်း ကိုယ်တို့အကြောင်း'
'ဒီ့ထက်ပိုပြီး ငါ့အချစ်ကိုမပေးနိုင်ဘူး၊ မင်းလည်းမနစ်နာအောင် ငါလည်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရာမကျအောင် လမ်းခွဲကြစို့ညီ'
မီးကိုအမှောင်ချ အေးစက်နေတဲ့အခန်းတွင်းမှာ ကျွန်တော်လှဲအိပ်နေမိသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်မှု များစွာဖြင့် ချာချာလည်နေရသည့်အဖြစ်က ဘယ်သူမပြုမိမိမှုသာလို့ ပြော ရင်ရသလို အချစ်ကိုငံ့လင့်မိသည့် မိမိ နှလုံးသားကိုလည်း သော့ခတ်မထားဖြစ်သည့်အကြောင်းများကြောင့်လို့ ဆိုရမလို ပင်ဖြစ်ပါသည်။
သတိရခြင်းများစွာ ပြီးတော့ တမ်းတမိတဲ့ အနမ်းများစွာကြောင့် မတွေ့ရသည့်ရက်တွေများမှာကျွန်တော် တစ်ယောက် တည်း ဖြစ်နေမိသည်။ အလုပ်များမှာစိတ်မပါလက်မပါဖြစ် နေမိတော့ သည်။ ဖုန်းဆက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းခွက်ကို ကောက်ကိုင် နံပါတ်တွေကို တစ်ခုချင်းနှိပ်ကာခေါ်မိရစဉ်မှာတော့
'ကိုကြီးမရှိပါဘူးခင်ဗျာ သင်တန်းသွားပါတယ်၊ ဘယ်သူလို့ပြောလိုက်ရမလဲဗျ'
'ကိုကြီး'တဲ့လား.....ကျွန်တော်ကတော့ အစ်ကိုလို့ပဲခေါ်မိခဲ့ သည်။ သူ့ကောင်လေးရဲ့ခေါ်သံတွေမှာ နွေးထွေးရင်ခုန်မှု သံစဉ် တွေပါနေသည်။ အို....စုံစမ်းမိသည် ခိုးကြည့်မိသည် သူတို့လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကိုပေါ့။ အရမ်းကို Romantic ဖြစ်ကြသည် ကြည်နူးကြသည် ပျော်ရွှင်ကြသည်။
ကျွန်တော်...ကျွန်တော်ဟာ အစ်ကို့အတွက်ဘာများလဲ ဘာဖြစ် ခဲ့သလဲဟင်...။
အချစ်ဆိုတာ နှင်းဆီဖြူတစ်ပွင့် လား......ဆုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတော့ လည်း ဆူးတွေနှင့်အပြည့် ကျွန်တော့်လက်ဖြူဖြူမှာ ဆွေးဆွေးနီ သွေးတွေရဲရပြီပေါ့။
'မင်းနဲ့ကိုယ်ကစကားပြောရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ် ဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွေးနွေးလို့ ရတယ်၊ မင်းက အတော်စကားပြောကောင်းသူပဲ'
'မင်းက စာလည်းဖတ်တယ် ဘလော့ခ်တွေလည်းရေးတယ် ဆိုတော့ ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ဖို့ယူသွားလေ'
တော်တော်ခင်မင်ဖို့ကောင်းသည့် သူငယ်ချင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့သူ နဲ့ကျွန်တော်ဟာ သူငယ်ချင်းဆိုသည့် စည်းထက်တော့ ကျော် နေသည်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါသည်။
အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းများစွာထဲမှ တွေ့ဆုံဖြစ်သည့် သူငယ်ချင်း လေးဖြစ်သည်။ နယ်ကတက်လာသည့် သူချင်းအတူတူ သူ့ကို ကျွန်တော်သဘောအတော်ကျမိရတာ သူ့စိတ်နေသဘောထား၊ အလုပ်အပေါ်အာရုံ ထားမှုနှင့် ပညာတော်သူ ဖြစ်နေခြင်း ကြောင့်ဖြစ်မည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသူ တစ်ဦး။
အို....လူများစွာနှင့် အံဝင်ခွင်ကျစကားပြောတတ်နေတတ်ထိုင် တတ်အောင် သူကပြသပေးခဲ့သည်။ သင်ကြားပေးသည် မဟုတ် သူလုပ်ဆောင်နေထိုင်ပြခြင်းတွေမှ ကျွန်တော် ရယူ မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သူ့အလုပ်မှ သူငယ်ချင်းတွေကို သူအတော်အလေးပေးသလို အတော်ပင်ခင်တွယ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အလုပ်ကနား ချိန်မှာ တရုတ်တန်းကိုသွား စားကြသောက်ကြ၊ ကန်တော်ကြီးမျှော်စင် ကျွန်းကိုသွား လွတ်လွတ်လပ်လပ်။ ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက် ဟာ ဘာဆိုတာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သိနေသလို အထင် သေးဟန်လည်းမပေါ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော် တို့ဟာ ချစ်သူတွေပဲ။
'ငါ့ အမေရယ်၊ ညီတွေရယ် လာနေတော့မယ် ဒီအခန်းမှာ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အတူလွတ်လွတ်လပ်လပ် နေလို့မဖြစ် တော့ဘူး'
'ငါ့ဘ၀မှာအမေကအရေးအကြီးဆုံးပဲ၊ အမေ့ကိုလုပ်ကျွေးခွင့် ရတာကိုလည်း ဂုဏ်ယူတယ်'
ရယ်ရယ်မောမောနှင့် အမြဲတစေဖော်ရွေသူ၊ဘယ်သူ့ကိုမေး မေးသူဟာ တော်တော်ခင်မင်ဖို့ကောင်းသူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အော်......ကျွန်တော်ကြောက်လန့်မိခဲ့သည့်တွယ်ငြိရမှုသည် နောက်တစ်ခါပျက်ပြယ် ရပြန်တော့ မည်ဖြစ်သည်။
ဟင့်အင်....ငါချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆန်ရမည်ဆိုတော့ လည်း မဟုတ်ပြန်သေးပါ။ သူ့အရည်အချင်းကို အားကျ သည် လား မဟုတ်သေးပါ။ ဘာကိုစွဲလမ်းမိသည် လည်း...အထိ အတွေ့လား မဟုတ်သေးပြန်ပါဘူး။
အချစ်ဆိုတာဘာလဲလို့ ဒီအချိန်မေးလာလျှင် အပေးအယူမျှတမှု လည်းမဟုတ်၊ ရယူမှုပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမဟုတ် 'ပေးဆပ်မှု' သက် သက်သာဖြစ်နေရသည်ပဲလေ။ ဘာလဲ....ဘာလဲ.....ဘာလဲ ကျွန်တော့်အတွက် အချစ်ဆိုတာ.။
'အချစ်ဆိုတာ ငါ့ဘ၀မှာသေဆုံးသွားပြီ၊ မင်းကိုမှမဟုတ်ဘူး ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်တော့ဘူး၊ ဟုတ်တယ် အဲဒါအမှန် တရားပဲ'
'ငါတို့က လက်ထပ်လို့ရသလား၊ ငါဟာ မင်းအတွက် မိန်းမ မဖြစ်နိုင်သလို လင်ယောက်ျားအဖြစ်လည်း ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး'
'တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်နေတယ်ဆိုရင်မင်းအရူးပဲ၊ ငါတို့က သဘာဝကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အချစ် ဆိုတာ မင်း သတိ ထားဦးလေ'
ရွှေတိဂုံဘုရားကိုရောက်တိုင်း ရွှေသင်္ကန်းအတူကပ်ခဲ့တာ ကို သတိရမိသည်။ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကို တစ်ပတ် ပတ်လမ်း လျှောက် ခဲ့ကြသည်ကို တမ်းတသည်။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ဖက်တွယ် တတ်သောလက်တစ်စုံနဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ကိုတွယ် တာမိသည်။
သဘာဝမဟုတ်ဘူးတဲ့လား...ကျွန်တော်သည် သဘာဝမကျ တဲ့ဘ၀တစ်ခုကိုဖက်တွယ်ထားသည်ဟု ဘယ်တုန်းကမှ မယူ ဆမိသလို ဘယ်တုန်းကမှလည်း အားငယ်စိတ်ဝင်ခဲ့သူ မဟုတ် ပြန်ပါ။ သဘာဝထဲက သဘာဝလူသားတစ်ဦး အဖြစ်သာ ခံစား ချစ်ခင်နေထိုင်ခဲ့ သည်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူ့လောကသည် တစ်ဦးတည်း နေထိုင်သည်မဟုတ်သလို စိတ်သ ဘောထားသည်လည်း တိုက်ဆိုင်သည်ဆိုတာ ထပ်တူမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါ။
တို့တွေ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ဆက်လက်ခင်မင်ကြတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ အမုန်းနဲ့လမ်းခွဲခြင်းမျိုး မလိုလားဘူး။ ပြီး တော့ မင်းနဲ့ခွဲသွားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်ပါဘူး ကိုယ့်အတွက်။ ဒီတော့ 'သူငယ်ချင်း'ဆိုတာလေးအဖြစ် ပတ်သက်ခွင့်ရ တာကိုပဲ ကျေနပ်ရမည်... ..ကျေနပ်ပါသည်။
ခေါင်းရင်းဘက် စံပယ်ခြုံက စံပယ်လေးတွေအရမ်းမွှေးသည် ပဲ.......ရွှေတိဂုံဘုရားက အင်္ဂါနံထောင့်မှာ ကိုယ်စံပယ် ပန်းလှူနေတယ်ကွာ ……သိလား....။
'မင်းနဲ့ဆုံဆည်းရတာ အစ်ကို့ဘ၀မှာ ကံကောင်းခြင်းပဲ၊ ဘယ်သူနဲ့မှမင်းမတူဘူးနော် '
'အစ်ကိုအကြံပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော့်ညီကိုဆုံးမလိုက် တယ်၊ အစ်ကိုကကျွန်တော့်ဆရာကြီးပါပဲ၊ လေးစားချစ်ခင်သွား မိပြီဗျ'
'ညီနဲ့ခင်မင်ချင်လို့ပါ၊ ကိုယ်မြန်မာပြည်ပြန်လာရင် ကြိုမှာ လားကွ'
'အစ်ကိုကတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော် အစ်ကိုသာ ကျွန်တော့်ချစ်သူအဖြစ်ရှိရင် ကျွန်တော့်အတွက် ကံအကောင်း ဆုံးဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲ'
'သူက တခြားသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်နေပြီလေ မင်းမချစ်သင့်ဘူး မကြိုက်သင့်တော့ဘူးကွ'
'ညီမှာချစ်သူရှိလား၊ ချစ်သူမရှိဘူးဆိုရင် အစ်ကို့အချစ်ကိုလက်ခံ ပါလားကွာ ညီ့စာတွေဖတ် ညီ့အသံတွေမကြားရရင် မနေနိုင် တော့ဘူး၊ အပြင်မှာတကယ်ချစ်ချင် မိပြီကွ..ကိုယ်မြန်မာပြည် ပြန်လာတော့မယ်....'
လူပေါင်းများစွာ တွေ့ဆုံမှုပေါင်းများစွာ …ခက်တော့လည်းခက်သည် လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းမနေတတ်တဲ့သတ္တ၀ါဆိုတော့လေ။ သူတို့ပြောစကားသံတွေကြားဝယ် ကျွန်တော်က နားထောင်သမားသက်သက်ဖြစ်ခဲ့သည် ပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုက အေးစက်စက်ပေါ့။
'မင်းမှာ ရင်ခုန်သံတွေတော်တော်ပေါတာပဲနော်၊ပြီးတော့ ပျော် စရာကြီး ငါ့မှာချစ်သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး အထီးကျန် သလိုပဲ၊ မင်းကတော့ အထီးကျန်တယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းသိမှာမဟုတ် ပါဘူး။'
အထီးကျန်ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ရမှုကိုဆိုလို သလား။ ကျွန်တော်...ကျွန်တော်ဟာ အမှန်တကယ်တော့ အထီးကျန်သူပါဗျာ။
အရင်နဲ့မတူ စိတ်ထဲကမပါပဲ ပြုံးရယ်တတ်ပါပြီ။ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုမပါဘဲ ရင်ခုန်ပြတတ်ပါပြီ။ သဘာဝကျကျ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပေါင်း သင်းဆက်ဆံ တတ်ပါပြီ။
ကြုံဆုံရတဲ့လောကကြီးကြောင့်ရော အတွေ့အကြုံအရပါ မိမိမဟုတ်သည့် မိမိဆိုသည့် သဏ္ဌာန်တစ်ခုကို ဖန်းဆင်း လိုက်ပါ၏။ ပျော်စရာကောင်းမှာပါနော်။
'ဟူး..'.လေရူးသုန်သုန်တိုက်ခတ်လာတဲ့ အေးစက်စက်လေတွေ ပြူတင်းပေါက်ကနေ တိုးဝှေ့လာသလို ရင်ဘတ်ထဲက အသည်း တွေဟာ အေးခဲလာပြီ။ နှင်းမှုန်ဝေတဲ့ဆောင်းညတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပူလောင်မှုအပြည့်ပါပဲ။
စိုစွတ်သွားသည့်လက်ခုံပေါ်ကို ဖျောက်ကနဲကျသည့် ရေတစ်ပေါက်သည် နှင်းမိုးစက်မဟုတ်ခဲ့။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းမှ ကြွေ သည့် မျက်ရည်တစ်ပွင့်သာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘာကိုမှန်းမသိ လွမ်းဆွတ်နေသလို အထီး ကျန်နေသည်..အထီးကျန်ဆန်နေရသည်ပဲ အခန်းကျဉ်းလေး ထဲမှာ တစ်ကိုယ်ရည် ဆောင်းညတွေကိုဖြတ်သန်းရင်းပေါ့ ခင်ဗျာ..။
Note: ကျွန်တော့်ရဲ့ တကယ့်အဖြစ်မှန် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး ရင်တွင်းဖြစ်စာသားများလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ကျွန်တော် မရေးတတ်တော့ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ခံစားချက်စာစုလေးကို ခင်မင်ရင်းစွဲအနေနဲ့ အားပေးကြပါဦးလို့။ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလရောက်တိုင်း ပြန်လည် တင်ဆက်မိတာကိုတော့ ဆောရီးပါနော်။
Posted by Alex Aung at 3:04 AM 1 comment:
ယခုလာမယ့် နိုဝင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့ဟာ လူသားသမိုင်းတလျှောက် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုတွေကြောင့် မကြွေသင့်ဘဲ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ကြရတဲ့ Transgender တွေကို အောက်မေ့သတိရတဲ့အနေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ Transgender Day of Remembrance (TDoR) နေ့လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွနိုပ်တို့အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာ (၂၀) ရက် ရောက်တိုင်း ခွဲခြားဆက်ဆံ၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်၊ အနိုင်ကျင့် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Transgender တွေကို အောက်မေ့သတိရတဲ့အနေနဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် လူသားသမိုင်းရဲ့ အနာဂတ်မှာ အလားတူ အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ နောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်ရအောင် ပညာပေးဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်း ဒီအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနှစ်မှာ ပြုလုပ်မယ့် TDoR အခမ်အနားကိုလည်း တတ်စွမ်းသမျှ အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာ ပြုလုပ်မယ့် TDoR အခမ်းအနားပွဲရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ "မတူကွဲပြား အမုန်းမပွား အကြမ်းဖက်မှု လျော့ချဖို့ အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်စို့" ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့ရက် - ၂၀ရက်နေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ခုနှစ်
အချိန် - ညနေ ၆း၀၀ မှ ၇း၃၀ ထိ
နေရာ - စိမ်းလန်းစိုပြေ (ကမာရွတ်မြို့နယ်)
Transgender Day of Remembrance (TDoR) တီဒေါ ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူများ (Transgender: ကျား၊ မ) အတွက် အမှတ်တရနေ့ (တီဒေါ) ဆိုတာဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူတွေကို မုန်းတီးတဲ့ သူတွေ ရဲ့ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက Transgender တွေကို အောက်မေ့သတိရတဲ့ နေ့ရက်တစ်ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်တရနေ့ဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း ကမ္ဘာတလွှားမှာရှိတဲ့ လိင်တူချင်းချစ်သူတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာသူတွေက အောက်မေ့သတိရတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ကျင်းပလာခဲ့ကြတာဟာ ဒီနှစ်နဲ့ဆို ၁၈ နှစ်တိုင်တိုင် ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်ကို တီဒေါနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရတာလဲ။
လူ့သမိုင်းတလျောက်မှာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူတွေကို ကွပ်မျက်သတ်ဖြတ်လာခဲ့ကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အများအပြားရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက သဘာဝတရားအတိုင်း ဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုလိုပဲလစ်လျူရှုခဲ့ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ မက်ဆက်ချူးဆက်ပြည်နယ်၊ သြောစတန်မြို့က ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူ ရီတာဟက်စတာ(Rita Hester) ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကနေစပြီးတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လိင်တူချင်းချစ်သူများ အခွင့်အရေး အတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေက ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ အနာဂတ်မှာ ဆက်လက်မဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီး ဆန္ဒပြု ကြရာက ဒီအမှတ်တရနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခါမှာတော့ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ကမ္ဘာ အ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်မှာ ဒီအထိမ်းအမှတ်နေ့ကို အမှတ်တရ ကျင်းပပြုလုပ်လျက် ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
Transgender တွေဘယ်လိုညှင်းဆဲနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရပါသလဲ။
ဆန့်ကျင်ဘက်လို ပြောင်းလဲခံယူနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာ အခြားသာမာန်လူတွေ သတ်ဖြတ်ခံရတာထက် ဆိုးရွားတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ အသတ်ခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနည်းလမ်းတွေကတော့ နောက်ကျောကနေ ဓါးနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထိုးခံရခြင်း၊ လည်လှီးခံရခြင်း၊ မုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်း၊ စံပြအနေနဲ့ ကာလီဘိုင်ကဲ့သို့သော လက်နက်များဖြင့် အပြစ်သတ်ခံရခြင်း၊ သေနတ်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ပစ်သတ်ခံရခြင်း၊ ဘေ့စ်ဘောလက်ကိုင်တုတ်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း၊ ကားနဲ့ဒရွတ်တိုက်ဆွဲ၍သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း၊ မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း အစရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ၀တ်စားနေထိုင်တဲ့သူတွေ ဒီကနေ့ တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ အန္တရာယ်တွေထဲကအနည်းအကျဉ်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ TDoR နေ့ရောက်ရင် သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်တဲ့ သူတွေကို အောက်မေ့သတိရတဲ့အနေနဲ့ ဖယောင်းတိုင်ဆီမီးထွန်းညှီပြီး အသိအမှတ်ပြု ကျင်းပလေ့ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု အမျှဝေမှုတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
More Info: Color Rainbow
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ပေါင်း ၁၈ မြို့တွင် Transgender Day of Remembrance (TDoR) အခမ်းအနားကျင်းပမည်။
အကြမ်းဖက်ခံရပီး သေဆုံးသွားကြသော ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ ဝတ်စားဆင်ယင်နေထိုင်သူများကို အောက်မေ့သတိရခြင်း အခမ်းအနား ( တီဒေါ) ကို တစ် ကမ္ဘာလုံးက နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့မှာ ကျင်းပကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ဆိုရင် ၁၈ နှစ်မြောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာမှာဆိုရင် ၅ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ မြို့ ၁၈ မြို့မှာ မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲများကျင်းပမှာဖြစ်လို့ အချိန် နေရာ တို့ကိုဖော်ပြပီးဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် -၂၀ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇
၁)ရန်ကုန်မြို့ - စိမ်းလန်းစိုပြေ - ညနေ ၆:၀၀-၇:၃၀
၂)မန္တလေးမြို့ - YI LINK hotel( 22*84) - ညနေ ၄-၇
၃) မလိူင်မြို့- ရွှေမောဌောဘုရားရင်ပြင် - ညနေ ၄-၆
၄)အေးသာယာ- ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသင်တန်းကျောင်း(နာရီစဉ်အနီး) - ညနေ ၄-၇
၅)ကလေးမြို့ - သိမ့် ခန်းမ - ညနေ ၅နာရီ
၆) မိုးကောင်းမြို့ - အမြဲစိမ်းချစ်သူများရုံး - နံနက် ၁၀ နာရီ
၇)ပဲခူမြို့ - အနောက်ရွှေနံသာဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အလင်းပြ ဓမ္မာရုံ၊ ကျွန်းသာယာရပ်ကွက် - ညနေ ၆-၈
၈)လားရှိုး - ရန်တိုင်းအောင် ဆုတောင်းပြည့် မြို့ဦးစေတီ၊ မင်္ဂလာထီးတော်တင် ရင်ပြင်ကွင်း၊ ရပ်ကွက် (၁) - ညနေ ၄-၆
၉)ပုသိမ်မြို့ - ဂရုဏာစင်တာ - ညနေ ၅-၇
၁၀)မြင်းခြံမြို့ - ရတနာ့ဗိမာန်ကျောင်း၊ မဟာဝါဋ္ဌုကာရာမ၊ အမှတ် (၁၀) ၊ ရတနာသိင်္ဂိလမ်း - ညနေ ၆-၉
၁၁)ရွှေဘိုမြို့ - မြို့ထောင့်စေတီ - ညနေ ၅-၇
၁၂)ပခုက္ကူမြို့ - နိဗ္ဗာန်တောင်ကျောင်း - ညနေ ၆-၇
၁၃) မြိတ်မြို့ - စေတနာခန်းမ (တိုင်းမွေးမြူရေးခြံရှေ့)၊ ကျားတွင်းအနီး၊ ကလွင်ရပ်- ညနေ ၅-၈
၁၄) မုံရွာမြို့ - ရွှေတာင်ဦးစေတီ - ညနေ ၆-၇
၁၅) ပြည်မြို့ - ဗိုလ်ချုပ်ကျောက်ရုပ်- ညနေ ၅-၇
၁၆) ထားဝယ်မြို့ - ဆိပ်ကမ်းသာခန်းမ (၂)၊ကမ်းနားလမ်း - ညနေ ၅-၉
၁၇) မော်လမြိုင်မြို့ - ဦးဇိနဘုရား - ညနေ ၆-၇
၁၈) ကျိုက်ထိုမြို့ - ကျိုက်ပေါလောဘုရား ၊ သံသရာအေးစေတီရင်ပြင် - ညနေ ၆-၇
Posted by Alex Aung at 6:00 PM No comments:
အမျိုးသားတွေ သုက်လွှတ်စောခြင်းကို ဘာကြောင့်ခံစားရတာလဲ
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေ၊ အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းဟာ စ်ိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားနေခြင်းဟာ ဒီပြဿနာရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေမှာ လိင်ဆက်ဆံမှုရဲ့အစမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှု အနည်းငယ် ရရှိရုံနဲ့ သုက်လွှတ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက အမျိုးသားတွေရဲ့ ၂၀-၃၀% လောက်ဟာ အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းကို တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာတော့ ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ ကိုးရိုးကားရားဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်း အကြောင်းရင်းများ
ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းတွေကတော့
စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စ်ိတ်ပူပန်မှုနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုတွေမှာ အဖြစ်များပြီး လူမြင်မှာ စိုးတာကြောင့် အမြန်ပြီးဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသားတွေဟာ ခံစားမှုလွန်ကဲပြီး ဖြည်းညင်းစွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာမှုရရှိရန် ခဲယဉ်းပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှု (သို့) အခြားဘဝ ပြဿနာတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း။ ဒါဟာ လှုံ့ဆော်မှုပိုဖြစ်စေပြီး အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မစွမ်းဆောင်နိုင်မှာကို စိုးရိမ်ခြင်း။ အမျိုးသားတွေဟာ လိင်တံထောင်မတ်မှုကို ကြာရှည်ထိန်းထားခြင်းဟာ သုက်ပိုးအမြန်ထွက်စေမယ်ဆိုတာကို စိုးရိမ်လွန်ပြီး ဒါကိုအကျင့်ပါသွားကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေကတော့ -
အာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု (သို့) ခွဲစိတ်ခြင်းတွေကြောင့် ထိခိုက်မိခြင်း
Serotonin ပမာဏ နည်းခြင်း
သုက်လွှတ်စနစ်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေများ
လိင်အင်္ဂါရောင်ရမ်းခြင်း (သို့) ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (အထူးသဖြင့် ဆီးကျိတ်၊ ဆီးပြွန်)
ဆီးချို (သို့) နှလုံးသွေးကြော ရောဂါများ
အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်း – ကုသမှုနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကြောင့် အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သူတွေဟာ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှု ယူသင့်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုခင် တစ်နာရီ (သို့) နှစ်နာရီလောက်ကြိုပြီး လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ခြင်းဟာ သုက်ပိုးလွှတ်ခြင်းကို အချိန်ရွှေ့နိုင်ပြီး သင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်ကို လိင်မဆက်ဆံခင် လိင်စိတ် နှိုးဆွထားခြင်းဟာ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ လိင်စိတ်အထွပ်အထိပ် ရောက်မှုကို ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားဟာ လိင်ဆက်ဆံမှုကို အနည်းငယ် ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ကာ သူ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ တုန်လှုပ်မှုတို့ကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ပေးနိုင်ပါတယ်။
အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းကို ကုသဖို့ နည်းလမ်းတွေကတော့ -
ရပ်လိုက်၊စလိုက် နည်းလမ်း – အမျိုးသားတွေဟာ လိင်စိတ် အထွတ်အထိပ်ရောက်တော့မယ်လို့ ခံစားရရင် လှုံ့ဆော်မှုကို လျှော့ချသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ လိင်တံကိုသာ ထောင်မတ်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ကျော်လွန်သွားရင်တော့ လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ညှစ်ခြင်း – အမျိုးသား လိင်စိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်ခါနီးရင် အမျိုးသမီးက လိင်တံကိုညှစ်နိုင်ပါတယ်။ သူမဟာ စက္ကန့်အတော်ကြာအောင် သုက်လွှတ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ မပျောက်မချင်း ညှစ်ထားသင့်ပါတယ်။ မိနစ်ဝက်လောက်ကြာရင်တော့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းကနေ ကိုယ်ခန္ဓာကို လေ့ကျင့်ပေးပြီး ဖြစ်သွားပါလ်ိမ့်မယ်
ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း – ကွန်ဒုံးတွေဟာ အမျိုးသားရရှိနေတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး အချိန်ပိုမို ကြာမြင့်စေပါတယ်။
ခံစားမှု လျော့ကျစေတဲ့ ချောဆီများ – သူတို့ဟာ လိင်တံအရေပြားကို ခဏတာထုံစေတဲ့ အစွမ်း ရှိပါတယ်။
ဆေး – စိတ်ကျဆေးတွေဟာ အမျိုးသားတွေ လိင်စိတ် အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းကို အချိန်ရွှေ့ခြင်းအတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လိင်စိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်တော့မယ် ဆိုရင် ဘေ့စ်ဘောအကြောင်း စဉ်းစားလိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာသ တောင်ရှိပါတယ်။ လိင်ကိစ္စနဲ့ မဆိုင်တဲ့ အရာတွေကို တွေးတောခြင်းဟာ လိင်တံထောင်မတ်မှုကို ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
Homemade Fleshlight :-*
အမျိုးသား အတော်များများပဲ သိကြသလို လိင်အာသာ ဖြေဖျောက်ရာမှာသုံးတဲ့ Fleshlight ကို အလွယ်​တကူ ၀ယ်ယူထားဖို့မလွယ်ကူတာ ၊ သိမ်းထားဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အခါ အိမ်ရှိပစ္စည်းအချို့နဲ့ DIY လုပ်ဖို့အတွက် Video Clips လေးတွေ Share လိုက်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများဖြင့် အာသာဖြေမိခြင်းပြုလုပ်မိခြင်းကို ရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 9:47 AM No comments:
ဖြူစင်တဲ့.. တကယ့်ကို နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ဖြူဖြူစင်စင်နိုင်လှသူလေး၊ သူလေး ရှင်းဘဝထဲကို ရောက်လာတဲ့နေ့က ထူးထူး ခြားခြား တိမ်တွေတောက်လို့ လှပနေလေသည်။ ဘယ်လိုပင် တိမ်တွေတောက်လို့ လှပနေငြား သူလေး၏ အလှကိုတော့ ဘယ် အရာမှ မမီနိုင်ပေ၊ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ အခုအရွယ်အထိ မခုန်တတ်ခဲ့ဖူးသော ရှင်းရဲ့ ရင်အခုန်သည် သူလေးနှင့် တစ်ခန်းတည်း အတူနေရမည်ဟု သိလိုက်သည့် ခဏတွင်ပင် ပရမ်းပတာ နိုင်လောက်အောင် အခုန်မြန်နေပေတော့သည်။
ရိုးသားလွန်းသော သူလေးမှာ ရှင်း အားမရတဲ့အချက်တွေ အများကြီးပဲ၊ နှစ်ဆယ်ရာစုရဲ့ မိန်းမပျိုတစ်ယောက် မဟုတ်သလို လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ ဘိုးတော်ဘုရားလေးဘက်တွားတဲ့ခေတ်က စတိုင်လ်တွေကို တကယ်ပဲ အသည်းယားမိသည်။ ဒီကြားထဲ ဘဝ အတွက် ရေရာအာမခံချက် မရှိလှသည့် အနုပညာကိုလည်း ဝါသနာပါလိုက်သေး၊ အစားအသောက်ကိုလည်း ကြည့်ဦး၊ မြန်မာ အစားအစာမှလွဲ၍ ကျန်အစားအစာများကို တို့မြည်းစမ်းသပ်ခြင်းပင် မရှိ၊ အဲ့လို အရာရာ ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်လှသော အားရစရာ မကောင်းသော သူလေးကိုပင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးချင်သော စိတ်များ ပေါက်ဖွားလာလေသလားတော့မသိ၊ ဟုတ်တယ်၊ သူလေးကို ရှင်း ချစ်နေမိပြီ။
အကြိုက်ချင်းမတူတဲ့ သူလေးအတွက် မနက်တိုင်း မုန့်ဟင်းခါးဝယ် ပြင်ဆင်ပေးတတ်တာ ရှင်းရဲ့ အကျင့်တစ်ခုပင် ဖြစ်နေပြီ၊ သူလေးကလည်း ရှင်းအကြိုက် ကိတ်မုန့်တို့ ဆင်းဝှစ်တို့ ဝယ်လာတတ်တော့လည်း ရှင်းမှာ ကျိတ်ပြီး ပျော်နေရပြန်ရော၊ သူ ဝယ်ကျွေးသမျှ အမြဲ စားကောင်းခဲ့ပေမယ့် ထိုနေ့ညကတော့ သူလေးဝယ်လာတာ စားချင်စိတ်မရှိတဲ့အပြင် တတ်နိုင်လျှင် လွှင့် ပါ လွှင့်ပစ်ချင်မိသည်။ ဖြစ်တာလည်း မပြောနဲ့၊ မိုးတွေ သည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေလို့ မီးတွေက ပျက်နေတဲ့ကြားထဲကနေ သူ ပြန်လာရင် အချမ်းပြေ စားပါစေတော့လို့ အပင်ပန်းခံ မီးမွှေးပြီး မုန့်ဟင်းခါးနွှေးပေးထားတာကို သူက ဟိုလူနဲ့အတူ ထီးတစ်မိုး တည်းအောက် အတူဆောင်းပြီး ပြန်လာတယ်လေ၊ ရှင်း ရင်ထဲမှာ မီးစနဲ့ထိုးသလို ပူလောင်ရချည်ရဲ့၊ အဲ့ဒီလူ ဘာအကြံနဲ့ သူလေးအနား ကပ်နေတယ်ဆိုတာ ရှင်း တောင်သိနေမှတော့ သူလေးလည်း မသိစရာအကြောင်းမှ မရှိတာ၊ ဒါကိုသိသိကြီးနဲ့ လက်ခံနေတယ်ဆိုတော့ … ရှင်း ဆက်ပြီး မစဉ်းစားချင်တော့သဖြင့် ကုတင်ပေါ် ပစ်လှဲကာ တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ငိုနေမိသည်။ သူလေးကတော့ သူပြင်ပေးထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးစားပြီး ဟိုလူ့အကြောင်းတွေးကာ ကျေနပ်နေမှာပေါ့လေ.. ထိုညကား ရှင်း အတွက် အိပ်မပျော်ခြင်းတို့နှင့် မိုးစင်စင်လင်းခဲ့ရသော ည ဖြစ်လေတော့သည်။
ဒီနေ့မနက်အစောကြီး နိုးနေမိသည်။ နဘေးရှိ ကုတင်ပေါ်တွင် ပြစ်ကင်းစင်လှစွာ အိပ်မောကျနေသော မွေးနေ့ရှင်လေး၏ မျက်နှာကို ငေးကြည့်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ သူလေး လူးလွန့်နိုးလာမှပင် သတိဝင်လာမိတော့သည်။ ညနေ ကျရင် ဘုရားအတူသွားရအောင်ဟု သူလေးကပြောလာတော့ ရှင်းလောက် ဝမ်းသာရသူရှိမည်မထင်ပေ၊ နှစ်ကိုယ်တူယှဉ်တွဲကာ ဘုရားမှာ တူစုံဆုတောင်းကြရမည့်အရေးအတွက် ပျော်ရွှင်နေရမှုကား ညနေ ဘုရားပေါ်အရောက်တွင် လေနီကြမ်းအတိုက်ခံ လိုက်ရသည့်နှယ် လွင့်စင်ပပျောက်သွားရသည်က ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ဟိုလူပါ ဘုရားပေါ်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီလူ့အကြောင်း ရှင်းသိသည်။ ရှင်းအတွက် ဒီလူက အန္တရာယ်ကောင်ကြီးပေ၊ မှတ်မှတ်ရရ ဒီလူ ဖြူစင့်အနားရောက်လာခဲ့တာ ပန်းချီပြပွဲနေ့က၊ အဲ့နေ့က ရှင်း ရုံးမှ နေ့တစ်ဝက်ခွင့်ယူပြီး ပြခန်းသို့လာခဲ့စဉ် ထိုလူ့ကို ဖြူစင့်အနားကပ်နေတာ တွေ့လိုက်ရ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့မှစ၍လည်း စနေ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်များတွင် ထိုလူ့အကြောင်း တတ်နိုင်သမျှ လိုက်စုံစမ်းကြည့်ရာ ထိုလူသည် မိဘမျိုးရိုးဆက် ချမ်းသာပြီး လုပ်ငန်းများလည်း ထူထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဟု သိရသည်။ ဖြူစင့်ဘဝအတွက် လုံခြုံ စိတ်ချရသူဟု မှတ်ယူကာ ထိုသူ့ကို ရွေးချယ်လိုက်မှာကို ရှင်း အလွန်ပဲကြောက်မိသည်။ ထိုလူကလည်း ဖြူစင့်ကို လိုက်လိုက် ချောင်းနေသည်မှာ မမြင်ချင်မှအဆုံး၊
ဟိုလူ့အကြောင်း စဉ်းစားရင်း စိတ်တိုနေသဖြင့် ရှင်းမျက်နှာသုန်မှုန်နေသည်ကို ရှင်းကိုယ်ရှင်းပင် သတိမထားမိ၊ သူလေးက ရှင်း ဘာဖြစ်နေတာလဲဟုမေးလာတော့ စိတ်တိုတိုနှင့် ထိုလူနှင့် ဖြူစင်တို့အကြောင်းတွေ ပြောပြလိုက်သည်။ အဆောင်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်ရင်း စကားပြောမည်ဟု ဆိုတော့ သူလေး လက်ခံသည်။ ဒီလိုနှင့် လမ်းတလျှောက် ရှင်း၏ မကျေနပ်ချက်များ ကို ပြောပြနေရာ သူကလည်း ပြန်ရှင်းပြသဖြင့် မိုးရွာသည့်ညက ရှင်းအတွက် မုန့်ကို အလေးထားသောကြောင့် ထိုလူနှင့် ထီး အတူဆောင်းခဲ့ရကြောင်းနှင့် ချစ်ခွင့်ပန်သည်ကို အပြတ်ငြင်းလိုက်ကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် ရှင်းရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိ ပျော်သွား မိသည်မှာ မြေကြီးနှင့် ခြေထောက်ပင် မထိလေသလားမှတ်ရသည်။
ရှင်း အနောက်မှာ ထိုလူပါလာသည်ကို မြင်မိထားသဖြင့် ရုတ်တရက်အကြံရကာ လမ်းလျှောက်နေသော သူလေး၏ လက်ကို ဆွဲလိုက်သဖြင့် သူလေး တုံ့ကနဲရပ်သွားကာ ရှင်းဘက်သို့ မျက်နှာမူ လှည့်ကြည့်လေသည်။ အရှိန်နှင့် ဆောင့်ဆွဲလိုက်သလို ဖြစ်သွားသဖြင့် သူလေးမျက်နှာနှင့် ရှင်းမျက်နှာတို့အကြား ဆံခြည်တစ်မျှင်စာမျှသာ အဟရှိတော့လေသည်။ ရှင်း ရင်တွေ ခုန် လာသည်။ သူရော ရင်ခုန်နေမလား၊ ရှင်း အရဲစွန့်ပြီး မေးလိုက်သည်။ ချမ်းသာပြည့်စုံပြီး ဒီလောက်ချစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဘာဖြစ်လို့ ငြင်းလိုက်တာလဲဟင် ဟု.. တကယ့်ကို တိုးတိုးညင်သာ လေသံလေးဖြင့် မေးခြင်းဖြစ်သော်လည်း ထိုအသံကပင် နှလုံးသား၏ ရိုက်ခတ်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တော်လဲသံပမာ ဟိန်းနေသည်ဟု ထင်နေမိသည်။ ရှင်း၏ စကားအဆုံး သူလေး၏ မျက်ဝန်းတို့ အရောင်လက်လာကာ နှုတ်ခမ်းတို့ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာသည်။ သူ ဘာများ ပြောလိုက်မှာပါလိမ့်၊ ထို စက္ကန့်ပိုင်း လေးသည်ပင် ရှင်းအတွက် တစ်ဘဝစာ ထင်မှတ်မှားလောက်အောင် ကြာနေလွန်းလှသည်။
တလှုပ်လှုပ် နှုတ်ခမ်းတစ်စုံသည် ရုတ်တရက် အပေါ်သို့ တက်သွားပြီး ရှင်းရဲ့ နဖူးလေးကို ဖွဖွလေး အနမ်းပေးကာ ရှင်းကို ချစ်လို့ ဆိုသည့် အသံတုန်တုန်လေးကြားလိုက်ရပြီး ထိုနှုတ်ခမ်းအစုံကပင် ရှင်းရဲ့ နူးညံ့သော နှုတ်ခမ်းသားများဆီသို့ ရောက် လာကြပြီး ချစ်ခြင်း၏ ချိုမြိန်သောအနမ်းများကို ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံး စတင်ရရှိခဲ့လေသည်။ သေချာပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည် ရှင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး ရှင်းသည်လည်း သူ၏ ဘဝသာ ဖြစ်စေရမည်ဟု။
ရှင်းတို့ ချစ်သူကာလ ပျော်စရာလေးများတွင် နယ်မှ သူ့မိဘများထံမှ စာတစ်စောင်က အပျော်များကို ပျောက်ဆုံးစေတော့သည် မိသားစုဆင်းရဲကြပ်တည်းမှုနှင့် သူမ၏ အိမ်ထောင်ဘက် အလဲအထပ်ပြုလုပ်ရမည့်အနေအထားမှာ သူလည်း ခံစားနေရသလို ရှင်းလည်း ရင်ကွဲမတတ်ခံစားနေရသည်။ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဘာမှမပြောဖြစ်ကြဘဲ နောက်တစ်နေ့ ညနေခင်းအချိန်တွင် အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ပြီး သူနှင့် စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့အနေနှင့် ရွာမှ စပါးပွဲစားဆိုသူထက် သူ့ကို တကယ် ချစ်မြတ်နိုးသော ပို၍လည်း ပြည့်စုံကြွယ်ဝသော ကိုလွင်မောင်ကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပေး တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူမ ချုံးပွဲချ ငိုပါတော့သည်။ ရှင်းလည်း သူငိုနေသည်ကို မကြည့်ရက်သဖြင့် လိုက်ငိုချင်နေမိသော စိတ်ကို ထိန်းကာ အချစ်ထက် ဘဝကို ပို၍ အလေးထားရမည်ဟူသော စိတ်ဖြင့်သာ မနည်းတင်းထားနေရသည်။ ငိုနေသည့်ကြားက သူ ရှင်းလက်ထဲကို သတင်းစာဖြတ်ပိုင်း တစ်ခု ထည့်ပေးရာ ရှင်းဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျောက်ကပ်အလှုရှင်အလိုရှိသည်၊ ထိုက်တန်စွာ ကျေးဇူး ဆပ်ပါမည် ဆိုသည့် ကြော်ငြာဖြတ်ပိုင်းလေးနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု၊ ဒါဆို.. ဒါဆို.. သူလေးက အချစ်အတွက် မိသားစုအတွက် ကိုလွင်မောင့်ကို မရွေးချယ်ဘဲ ကျောက်ကပ်ရောင်းစားဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့… အို.. ဖြူလေးရယ် ရှင်းကို အဲ့လောက်တောင် ချစ်ရတာလားဟင်၊ ရှင်း မခံစားနိုင်တော့ဘဲ သူ့ကိုဖက်ကာ အတူတူ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေမိသည်မှာ နောက်နေ့မနက် မိုးစင်စင်လင်းသည်အထိပင်၊
လမ်းဘေးဖုန်းဆိုင်တစ်ခုတွင် သူက ကျောက်ကပ်အလှုခံထံ ဖုန်းဆက်နေစဉ် နဘေးရှိ ဖုန်းဆိုင်မှ ဖုန်းဖြင့် ရှင်းလည်း နံပါတ်တစ် ခုကို နှိပ်နေမိသည်။ အခြားမဟုတ်၊ ရှင်းစုံစမ်းထားသော ကိုလွင်မောင်၏ ကုမ္ဗဏီဖုန်းပင်ဖြစ်သည်။ ကိုလွင်မောင်နှင့် ဖုန်းပြောရ ပါသည်။ အရာရာအတွက် ကိုလွင်မောင် စောင့်ရှောက်ပေးပါရန်နှင့် ဖြူလေး၏ အသက်အန္တရာယ် မထိခိုက်စေရေးအတွက် ဖြူလေးကို ကိုလွင်မောင့်ထံ အပ်နှံပြီး ရှင်း အဝေးတစ်နေရာသို့ ထွက်သွားမည့်အကြောင်းပြောတော့ ကိုလွင်မောင်က ငြင်းသည် ငွေကြေးကိစ္စအတွက် သူကူညီပါမည်တဲ့၊ ဖြူစင်နဲ့ ရှင်းတို့ရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ချစ်ခြင်းကို သူအပြည့်အဝနားလည်ပေးနိုင်သဖြင့် ရှင်း ထွက်သွားရန်မလိုပါတဲ့၊ သူအခုလို ကူညီတာကိုလည်း ဖြူစင်မသိပါစေနဲ့တဲ့၊ တစ်ခုပဲ သူ့ကို ကတိပေးပါတဲ့၊ သူချစ်တဲ့ ဖြူစင့်ကို အသက်ထက်ဆုံး ချစ်ခင်မြတ်နိုးစောင့်ရှောက်ပေးပါတဲ့၊ အကိုတစ်ယောက်ပမာ သူအဝေးကနေ အမြဲ ကူညီပေးနေမှာကို လက်ခံ ပေးပါတဲ့၊ ရှင်း မျက်ရည်များကြားမှပင် ကိုလွင်မောင့်ကို ကျေးဇူးတင်စကား အထပ်ထပ်ပြောနေမိတော့သည်။ ထိုနေ့ညနေမှာပင် ပန်းချီပြခန်းမှ ဆက်သွယ်လာသည်။ ဖြူစင်၏ ပန်းချီကားများ အားလုံး ဈေးအမြင့်ဆုံးနှင့် ဝယ်ယူသွားကြောင်းပေါ့၊ သူလေး အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်နေသည်ကို ကြည့်ရင်း ရှင်းလည်း မျက်ရည်များ ဝေ့သီလာအောင် ပျော်ရွှင်နေမိသည်။ စိတ်ထဲမှလည်း ကိုလွင်မောင့်အပေါ် အရင်က စိတ်နှင့် စော်ကားမိသည်များကို တောင်းပန်ရင်း ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။
ဒီလိုနှင့် ဖြူစင်၏ ပန်းချီကားများကို လစဉ်ပုံမှန် ဝယ်ယူနေသူ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ရှင်းတို့နှစ်ယောက် ဘဝရပ်တည် ရှင်သန်ရေး မှာ ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူလာခဲ့သည်။ ရှင်းတို့နှစ်ယောက် အဆောင်နေဘဝမှ ပျဉ်ထောင်အိမ်သေးသေးလေးဖြင့် ကိုယ်ပိုင် ဘဝကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို လေးစားအားကျ ကြသည်အထိပင်၊ ရှင်းတို့ ခြံထဲမှာ ပန်းပင်ရေလောင်းနေတာဖြစ်စေ၊ ဒါန်းလေးပေါ် ထိုင်စကားပြောနေတာဖြစ်စေ အတူတူ ရှိနေချိန်များတွင် မလှမ်းမကမ်းမှ ကိုလွင်မောင် လာလာကြည့်တတ်သည်ကို ရှင်း သတိထား တွေ့နေမိသည်။ ကိုလွင်မောင်ရဲ့ ဖြူလေးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကိုလည်း လေးစားအသိအမှတ်ပြုမိတော့သည်။ တခါတရံ ငါ မတရားသလိုများ ဖြစ်နေသလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလုံမလဲဖြစ်မိချိန်များတွင် လူနှစ်ယောက်၏ ချစ်ခြင်းကို တပြိုင်နက်တည်းခံရသော ဖြူလေး ၏ ကောင်းလွန်းလှသည့် ကုသိုလ်ကံကိုသာ ရမယ်ရှာ အပြစ်တင်လိုက်မိတော့သည်။
အခုထိတိုင် ရှင်းတို့ ၂ယောက်လုံးအပေါ် စိတ်ထားကောင်းဖြင့် ကူညီနေသော ကိုလွင်မောင် အိမ်ထောင်ပြုသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကိုတော့ ဖြူလေးကို ပြောပြဖြစ်သည်။ ဒါတောင် ဖြူလေးက ရှင်း ဘယ်လိုသိတာလဲဟု မေးလာသဖြင့် သတင်းစာထဲ ဖတ်မိတာ ဟု ကမန်းကတမ်း ဖြေလိုက်ရသေးသည်။ တကယ်တော့ ကိုလွင်မောင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြူစင်ကြီးမားပုံနှင့် ကျေးဇူးတရား တို့ကို ဖြူလေးကို ပြောပြချင်မိသော်လည်း ပေးထားသော ကတိအရ ရှင်း ပြော မထွက်ခဲ့သည်မှာ အဝေးတစ်နေရာမှ လာလာကြည့်လေ့ရှိသည့် ကိုလွင်မောင့်ကားပေါ်တွင် ပါလာတတ်သော သူ့သားလေး အရွယ်ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ပင်၊
ရှင်းဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရပြီဖြစ်သည်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်း စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြင့်သာ ဘဝကူး ချင်တော့သည်။ ကိုလွင်မောင့်ကို စိတ်ထဲမှ တီးတိုးတောင်းပန်ရင်း ရှင်း ဖြူလေးကို ချစ်သူသို့ ဟူသည့် ပန်းချီကားလေးကို ယူလာပေးရန်ပြောပြီး ဖြူလေးကို ဖြစ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံး အလေးအနက်ထား ပြောပြနေမိသည်။ နားထောင်ရင်း ဖြူလေးလည်း မျက်ရည်များတွေတွေစီးကျနေခဲ့သည်။ ကိုလွင်မောင့်ကို အားနာလိုက်တာ ဆိုသည့် ဖြူလေး၏ စကားသံတွင် တစ်သက်လုံး ပိုက်ထွေးထားရသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခု လွတ်ကျသွားသလို ပေါ့ပါးသွားတော့သည်။
ရှင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ့ပါးနေသည်မှာ လိပ်ပြာတစ်ကောင်အလားပင် ဖြစ်သည်။ ဟုတ်သည်၊ ရှင်း လိပ်ပြာလေး ဖြစ်နေ တာပဲ၊ ထိုလိပ်ပြာလေး ကမန်းကတန်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှာဖွေကြည့်တော့ ထင်သည့်အတိုင်း ဖြူလေးအနားမှာ သူပျံဝဲနေတာ မလို့ ရှင်း လိပ်ပြာဘဝကိုပင် ကျေနပ်သွားမိသည်။ ဖြူလေး၏ ပုခုံးထက်မှာ နားလိုက်တော့ ဖြူလေး မျက်ရည်များ ကျလာလေသည်။ ကျီးခြေရာများနှင့် ရင့်ရော်နေသော ဖြူလေး၏ မျက်ဝန်းအိမ်များက လိပ်ပြာလေးသည် ရှင်းဖြစ်သည်ကို သိနေ သည့် အမူအရာများ အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။ နုနယ်ပျိုမြစ်ခြင်း ဆုတ်ယုတ်လာသော ဖြူလေး၏ လက်ဖဝါးဖြူဖြူလေးများကို ဖြန့်ပေးလိုက်ရာ ရှင်း ထိုလက်ဖဝါးပေါ်သို့ ပျံကာနားနေလိုက်သည်။ ရှင်းတို့နှစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ လက်တွဲမဖြုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ဖူးသော ဖြူလေး၏ လက်များသည် ယခုထိတိုင် ချစ်ခြင်းဖြင့် နွေးထွေးနေဆဲပါလား၊
ညနေပိုင်းကျတော့ ရှင်း လေမှာ ပျံဝဲရင်း၊ ပခုံးပေါ်မှာ နားခိုရင်းနှင့် ဖြူလေးနှင့်အတူ အပြင်တစ်နေရာသို့ လိုက်ပါလာခဲ့သည်၊ ထိုနေရာ၏ မြင်ကွင်းလေးကို ရှင်း မြင်ဖူးနေလိုက်တာဟု တွေးနေမိစဉ် အော် ဖြူလေးရဲ့ ချစ်သူတို့ ပန်းချီကားထဲက မြင်ကွင်းပဲ ဆိုတာ ပြန်မှတ်မိလိုက်သည်။ တစ်ခုပဲ ကွာသည်.. အုတ်ဂူက တစ်လုံးတည်းဖြစ်နေခြင်းပင်၊ ဖြူလေး ထိုအုတ်ဂူနဘေးတွင် ရပ်ကာ နှင်းဆီပန်းလေးတင်ဖို့ အုတ်ဂူပေါ်က ရွက်ကြွေခြောက်များကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်၊ အို.. ရှင်းရဲ့ အုတ်ဂူပေါ်မှာ ချစ်သူသို့ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားလေးကို ပုံသွင်းထည့်ထားပေးတာပါ လား၊ ချစ်လိုက်တာ ဖြူလေးရယ်၊ ရှင်း နောက်ဆုံးမှာခဲ့သည့် အတိုင်းပင် ချစ်သူသို့ ပန်းချီကားလေးမှာ နောက်ထပ် အုတ်ဂူလေး တစ်လုံး ထပ်တိုးလာသည်။ ရှင်းတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ကိုလွင်မောင့်အတွက် နေရာတစ်ခုပေးစေချင်ခဲ့သည်မဟုတ်လား၊
ဖြူလေး ရှင်းစကားကို နားထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမယ့် သူ နေရာပေးထားတာ ရှင်းတို့ရဲ့ အုတ်ဂူနှစ်ခုဘေးမှာတော့ မဟုတ်ပေ၊ အုတ်ဂူနှစ်ခုရဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ အုတ်ဂူသေးသေးတစ်လုံး ထပ်ဖြည့်ပေးထားသည်။ အော် ဖြူလေးရယ်၊ အင်းပေါ့လေ၊ ကိုလွင်မောင်ကလည်း ဖြူလေးနဲ့ ရှင်းတို့ရဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာပဲ အမြဲ ရှိတတ်တာ မဟုတ်လား၊ အခုရော ကိုလွင်မောင် ဘယ်မှာ များပါလိမ့်၊ လိပ်ပြာလေး ဟိုသည်လှည့်ကြည့်ရာ ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ရပ်ထားသော ကားတစ်စီး၊ သေချာပါသည် ထိုကားပေါ်တွင် ကိုလွင်မောင်ရှိနေမည်ဆိုတာ၊
တဖြေးဖြေးနဲ့ လေနုအေးတို့တိုက်ခတ်ကာ နေရောင်တို့ ဖျော့လာချိန်တွင် အုတ်ဂူဖြူဖြူလေးတစ်လုံးပေါ်တွင် ခေါင်းအပ် ထားသော အဖွားအိုတစ်ယောက်၊ ခပ်လှမ်းလှမ်း ကားလမ်းပေါ်တွင် ရပ်ထားသော ကားတစ်စီးနဘေး တုတ်ကောက်တစ်ချောင်း ထောက်ကာ ထိုအုတ်ဂူသို့ မျှော်ငေးကြည့်နေသော အဖိုးအိုတစ်ဦးနှင့် အဖွားအို၏ ပခုံးထက်တွင် နားနေသော လိပ်ပြာလေး တစ်ကောင်တို့၏ မြင်ကွင်းသည် တဖြေးဖြေး အနောက်သို့ ယွန်းသွားသော နေရောင်နှင့်အတူ ပျောက်ကွယ် သွားလေသည်။
ရေးသားသူ - ငြိမ်းချမ်းကျော်
Posted by Alex Aung at 10:32 AM No comments:
ချစ်သူသို့ (အပိုင်း တစ်)
ညနေခင်း ဆည်းဆာချိန် တိမ်ရောင်စုံများက တောက်ပနေသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး သာယာ လှပနေပေသည်၊ အဝေးပြေး လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကားအချို့သာ ကျိုးတို့ကျဲတဲ ဖြတ်သန်းနေကြပြီး အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှ ကိုက် (၃၀၀) ခန့် အကွာရှိ ကုက္ကို ပင်ညိုကြီးအောက်တွင် ဖြူဖွေးသန့်စင်နေသော အုတ်ဂူလေးတစ်လုံး ထီးတည်းကြီး တည်ရှိနေပြီး လေအဝေ့တွင် ကုက္ကိုလ်ရွက် တို့က အုတ်ဂူဖွေးဖွေးပေါ်သို့ ကျဲဖြန့်ချနေသည်မှာ တစ်မျိုး ကြည့်လို့ကောင်းနေပေတော့သည်။
ထိုမြင်ကွင်းကို ကတ္တရာကားလမ်းနဘေးတွင် Lexus 4x4 Wagon ကားကြီးတစ်စီးရပ်ထားပြီး ထိုကားထဲမှ အသက် (၆၀) ခန့် အဖိုးအို ဦးလွင်မောင် ဆိုသူ ကြည့်နေလေသည်။ ကြည့်နေရင်းမှာပင် သူ၏ လက်မှာ ပတ်ထားသော လက်ပတ်နာရီကို တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ရာ ညနေ ၄း၅၀ ကို ညွှန်ပြနေလေသည်။ ဒါဆို နောက် ၁၀ မိနစ်တိတိမှာ သူ ဒီနေရာကို ရောက်လာတော့မှာပဲ.. ဦးလွင်မောင် တစ်ချက်တွေးလိုက်မိပြီး နာရီနှင့်ဝတ်ထားသော လက်မှ အရေများ တွန့်နေသည်ကို သတိတစ်ချက်ထားမိသွား ကာ ပြုံးလိုက်မိသည်။
ဟုတ်သည်၊ သူနှင့်စတွေ့တုန်းက ဦးလွင်မောင်ရဲ့ လက်တွေ အခုလို အိုမင်းခြင်းမရှိသေးပေ၊ နုပျိုလတ်ဆတ်နေသော သန်မာ သည့် လက်တစ်ဖက်သည် အခန်းနံရံပေါ်ရှိ ချိတ်ဆွဲထားသော ပန်းချီကားတစ်ချပ်၏ အနုစိတ်လက်ရာများကို ကိုင်တွယ်စမ်းသပ် ကြည့်ချင်လွန်းလှသဖြင့် ပန်းချီကားကို မြတ်နိုးစွာ ကိုင်တွယ်ကြည့်ရန် လက်ချောင်းလေးများ တရွရွနှင့် တိုးကပ်သွားစဉ် သူ၏ လက်ကို ဖျတ်ကနဲ ပုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရသဖြင့် ရုတ်တရက် အံ့အားသင့်သွားပြီး ကြည့်လိုက်ရာ မိမိလက်ကို ပုတ်ချလိုက်သူမှာ လွင်မောင်၏ တစ်သက်တွင် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသော နတ်ဘုရားမတစ်ပါးအသွင် မိန်းမချောလေးဖြစ်နေလေသည်။ လွင်မောင် ကြောင်တောင်ငေးကြည့်နေစဉ် ထိုနတ်ဘုရားမလေးမှ “မကိုင်ရလို့ ရေးထားတာ စာမဖတ်တတ်ဘူးလား” ဟု ပြောပြီး ချာကနဲ လှည့်ထွက်သွားလေသည်။ လွင်မောင် လည်ပြန်လိုက်ကြည့်နေရာမှ ပန်းချီကားကို ပြန်ကြည့်ကာ ကားနာမည်ကို မှတ်လိုက်ပြီး ကောင်တာဆီသို့ အပြေးလှမ်းမိတော့သည်။
“ချစ်သူသို့ ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားလေးက ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ စိတ်မရှိပါနဲ့နော်… ဆရာမဖြူစင်ရဲ့ exclusive show မှာ ပြရုံ ပြထားတဲ့ကားမလို့ပါ” ပန်းချီပြခန်း တာဝန်ရှိသူ၏ စကားသံများအဆုံးမှာ လွင်မောင့်ရင်ထဲ ဟာကနဲဖြစ်သွားရသည်။ ပန်းချီ ကားကို ဝယ်ယူခွင့်မရလိုက်တာကိုပင် ပန်းချီဆရာမလေး ဖြူစင့်ကိုပါ တစ်သက်လုံးစာ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလို ခံစား ရသဖြင့် “ဘယ်ဈေးဖြစ်ဖြစ် အမြင့်ဆုံးဈေးပေးပါ့မယ် ရောင်းပေးပါလား” တတွတ်တွတ် ပူဆာနေမိတော့သည်။ ပြခန်းတာဝန်ခံ က ခဏစောင့်ရန်ပြောပြီး ဆရာမဖြူစင်နှင့်အတူပြန်ရောက်လာလေသည်။
“ကျွန်မလက်ရာကို အခုလို တန်ဖိုးထား အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခု အကို လိုချင်တဲ့ ပန်းချီကားကို မရောင်းပေးနိုင်တာတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့.. ဆောရီးပါ ..” ဖြူစင်ဆိုသော ပန်းချီဆရာမလေးသည် ရုပ်ရည်သာမက အသံကလည်း တကယ်ပင် သာယာနာပျော်ဖွယ် ရှိလှသည်။ ကောင်းခြင်းအဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံလှသော သူမနှင့် ဆက်လက် စကားပြောဆိုလိုသောကြောင့် “ဟိုလေ ဒီကားလေးက တစ်ယောက်ယောက်ကို ရည်စူးရေးဆွဲထားတာမလို့များလားဟင်” လွင်မောင်၏ မေးခွန်းသံအဆုံးတွင် ခန့်မှန်းရခက်သော မျက်နှာထားပြောင်းသွားပြီး ချက်ချင်းပြင် မျက်နှာပြန်ပြင်ကာ အပြုံးဖြင့် “ဆိုပါတော့ရှင်.. ကျွန်မ အသက်ထက်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူအတွက် ဆွဲထားတာပါ ရှင်က အကဲခတ်တော်သားပဲ” “မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ကားနာမည်က ချစ်သူသို့ ဆိုလို့ပါ.. တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော် သဘောကျမိတာက အရမ်းလှတဲ့ ဆည်းဆာချိန် မိုးကုပ် စက်ဝိုင်းအစွန်းကို မေးတင်နေတဲ့ နေလုံးကြီးနောက်ခံမှာ အုတ်ဂူလေး ၂ခုနဲ့ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာ တကယ့်ကို ဟာမိုနစ်ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ.. ကြည့်တာနဲ့တင် တကယ့်ကို ခံစားရလို့ပါ” ဖြူစင် မျက်ဝန်းများ အရောင်တစ်မျိုးဖြင့် လက်ကနဲဖြစ်ပြီး လွင်မောင့်ကို ရီဝေဝေကြည့်ကာ “ရှင့်လိုပဲ သူလည်း ကျွန်မရဲ့ အနုပညာတွေကို ခံစားတတ်ရင်ကောင်းမှာပဲ” “ခင်ဗျာ” “အော် ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး.. ရှင် ခံစားတာနဲ့ သိပ်တော့ မကွာပါဘူးလေ.. ပန်းချီကားလေးရဲ့အဓိပ္ဗါယ်က ကျွန်မတို့ အတူတူသာရှိမယ် ဆိုရင် နေဘယ်တော့မှ ဝင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ.. ကဲ ရှင် အခြားပန်းချီကားတွေ အားပေးနိုင်ပါတယ် ကျွန်မကို ခွင့်ပြုပါဦး ကျေးဇူးပါနော်” ပြောပြီး လှည့်ထွက်သွားသော ဖြူစင်၏ဆံနွယ်ရှည်များကို သူမပန်းချီကားထဲမှ ဆည်းဆာချိန်နှင့်အတူ မြင်ယောင်ရင်း လွင်မောင် ကျန်နေခဲ့မိသည်။
ဖြူစင်သည် သာမန်ကောင်မလေးဖြစ်သည်။ အဆောင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိဘများက နယ်မှာဖြစ်ပြီး ဖြူစင်၏မောင်တစ်ယောက် နှင့် ညီမတစ်ယောက်တို့နှင့်အတူ နယ်တွင်သာ အခြေချနေထိုင်ကြလေသည်။ အချိန်ပိုင်း ကျူရှင် စာသင်ပြီး ရှာဖွေ၍ ရသမျှကို နယ်မှ မိသားစုထံ ပြန်ပို့တတ်သည်။ ကျန်သော အားလပ်ချိန်များတွင် ဝါသနာပါရာ ပန်းချီကားများ ရေးဆွဲလေ့ရှိသည်။ အနေအထိုင် သိမ်မွေ့ပြီး ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသည်။ ယနေ့ ခေတ်နှင့်မကိုက်ညီသော ရိုးရှင်းလွန်းသည့် ဝတ်စားဆင်ယင် မှုမျိုးနှင့်သာ လုံခြုံသေသပ်စွာနေထိုင်လေ့ရှိပြီး မြန်မာအစားအစာကို သာ ကြိုက်နှစ်သက်စွာ စားလေ့ရှိသည်။ သူမအကြိုက်ဆုံး အရာမှာ မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်ပြီး အချိန်မရွေး ထမင်းလွတ်ပင် စားနိုင်သည် အထိ ကြိုက်နှစ်သက်လေသည်။ ဤအရာများသည် ဖြူစင်နှင့် ပတ်သက်၍ လွင်မောင် တစ်ပတ်အတွင်း စုံစမ်းရသမျှ သိထားရသည့် အချက်များပင်ဖြစ်သည်။
သို့ပေမယ့် လွင်မောင် သိချင်နေသည်ကား ဖြူစင် မြတ်နိုးလှသည့် ပန်းချီကားပိုင်ရှင် ဖြူစင်၏ ချစ်သူပင် ဖြစ်သည်။ စုံစမ်း၍ ရသလောက်လည်း ဖြူစင့်မှာ တွဲသွားတွဲလာ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းပင် မရှိချေ၊ အဆောင်နေ သူငယ်ချင်း ရှင်းသန့်ဆိုသူ သွက်သွက်လက်လက် မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သာ ရှိသည်။ ဖြူစင့်သူငယ်ချင်းကလည်း ဖြူစင်နှင့် အသွင်တူလှ သည်။ သွက်လက်သော်လည်း တည်ကြည်သည်။ ဖျတ်လတ်သော်လည်း သိမ်မွေ့သည်။ ဖြူစင့်လောက် မရှည်သော်လည်း ကျောလယ်အထိ ဝဲနေသော ခွေကောက်ကောက်ဆံပင်လေးများနှင့် ခြေမျက်စိအထိ ခြေသလုံးအလယ်ကျော်ကျော် ထမိန်ကို မတိုမရှည်ဝတ်ထားတတ်ပုံလေးက တစ်မျိုးထူးဆန်းသည်။ ရယ်လိုက်လျှင် ပါးချိုင့်လေးနှင့် ဖွေးနေသော သွားတန်းလေးများက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဇော်လတ် ကြိုက်တတ်သော ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။
လွင်မောင်တွေးရင်းနှင့်ပင် ပြုံးမိသည်။ စိတ်ကူးထဲမှာ သူက ဖြူစင်နှင့်ချစ်သူတွေဖြစ်၊ ဇော်လတ်က ရှင်းသန့်နှင့် ချစ်သူတွေဖြစ်၊ သူတို့ ၄ယောက်အမြဲမခွဲအတူတူလက်တွဲကြရင် ပျော်စရာကောင်းမည်ဟု တွေးမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခုတော့ ဖြူစင့် ချစ်သူဆိုသူကိုပင် သူစုံစမ်းလို့မရသေး၊ ဇော်လတ်အတွက် ရှင်းသန့်အကြောင်းစုံစမ်းပေးဖို့ကား ပို၍ပင် ဝေးသေးတော့သည်။ လွင်မောင် ခေါင်းထဲတွင် ဖြတ်ကနဲ အတွေးတစ်ခုပေါ်လာသည်၊ ဒါဆို ဖြူစင့်မှာ ချစ်သူမရှိသေးဘဲနဲ့ တမင်ပြောတာများဖြစ်နေ မလားဟု၍ပင်၊ ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့မိန်းကလေးတွေက အရှက်ကြီးသည်။ တစိမ်းယောက်ျားလေး ချဉ်းကပ်လာလျှင် ကြိုတင် ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ချစ်သူရှိသည်ဟု ပြောလွှတ်တတ်ကြသည်မဟုတ်လား။ ဟုတ်တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ ထပ်ကြိုးစားရ မည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သံဓိဌာန်ချမှတ်လိုက်လေသည်။
ထိုနေ့က မှတ်မှတ်ရရ မိုးလေးများ ဖွဲဖွဲရွာနေလေသည်။ စာသင်ရာမှ ပြန်လာသော ဖြူစင်တစ်ယောက် အပင်အောက်တွင် မိုးခို နေပြီး လက်ထဲမှ အထုပ်တစ်ခုကို မိုးရေမစိုအောင် အသည်းအသန် ကာကွယ်နေလေသည်။ လွင်မောင် အပြေးအလွှား ထီးမိုး ပေးလိုက်ရာ ဖြူစင် မော့ကြည့်ပြီး ခေါင်းကို ပြန်ငုံ့လိုက်လေသည်။ ထိုညက ဖြူစင့်ကို အဆောင်ရောက်သည်အထိ ထီးမိုးပြီး သူ လိုက်ပို့ပေးဖြစ်သည်။ သူ ဖြူစင်ကို ချစ်ကြောင်းပြောတော့ ဖြူစင် မတုန်မလှုပ်၊ လွင်မောင်ပြောနေသော စကားများထက် သူမ လက်ထဲမှာ အထုပ်ကို ရေမစိုစေရေးက ပိုအရေးကြီးနေပုံရသည်။ နောက်ဆုံး လွင်မောင် မနေနိုင်ဘဲ မေးလိုက်တော့ ဆင်းဝှစ် မုန့်ထုပ်တဲ့၊ အဆောင်သို့ လိုက်ပို့ပြီး မိုးရေထဲ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချ ပြန်သွားသော လွင်မောင် သူပြန်ရလိုက်သည်က ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားပါနဲ့တဲ့ .. သူ့မှာ ထာဝရအတွက် အချစ်ရဆုံးလူရှိပြီးသားမလို့ ခင်မင်ရုံကလွဲရင် မတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့…
လက်မလျှော့တတ်သော လွင်မောင် ဖြူစင့်နောက်သို့ မသိမသာလိုက်မြဲ လိုက်စဲ၊ တစ်နေ့.. ထိုနေ့သည်ကား ဖြူစင်၏ မွေးနေ့၊ ညနေပိုင်း ဘုရားတက်ပြီး အဆောင်သို့ လမ်းလျှောက်သွားသော ဖြူစင်နှင့် ရှင်းသန့်တို့နောက်သို့ မယောင်မလည်နှင့် လွင်မောင် လိုက်နေမိသည်။ တဖြေးဖြေးနှင့် နေညိုရာမှ ဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လူပြတ်သော လမ်းကြားလေးထဲ လျှောက်သွားကြ စဉ် လျှောက်နေရာမှ ရပ်လိုက်ကြသဖြင့် လွင်မောင် အနီးရှိ သစ်ပင်တစ်ပင်နောက်သို့ ကွယ်ကာ ဝင်ရပ်လိုက်ပြီး မသိမသာ ကြည့်နေမိရာ လွင်မောင် မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် သူ့မျက်စိကိုပင် သူမယုံနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။ လွင်မောင် မြင်လိုက်ရသည်ကား ရှင်းသန့်၏ နဖူးလေးကို ဖွဖွညင်သာလေး နမ်းလိုက်သော ဖြူစင်၊ ထိုမှသည် တဖြေးဖြေးနှင့် နှုတ်ခမ်း ၂စုံ တို့ ပူးကပ်သွားသည်ကို လရောင်တွင် ဝိုးတဝါးမြင်လိုက်ရသဖြင့် တစ်ဖက်သို့ပြန်လှည့်ကာ အကြည့်လွှဲလိုက်မိသည်အထိပင်။
ကျွန်မ၏ ရိုးရှင်းသော ဘဝထဲသို့ သူစတင်ဝင်ရောက်လာချိန်ကား ဒေးဒရဲမြို့လေးမှ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် အလုပ်ရှာဖွေရန် အတွက် တစ်ယောက်တည်း တက်လာပြီး သုခရိပ် အမျိုးသမီးဘော်ဒါဆောင်သို့ စတင်ခြေချရောက်ရှိချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ သူ့ နာမည်က ရှင်းသန့်တဲ့၊ ကျွန်မက ဖြူစင်ဆိုတော့ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းလေးက ဖြူစင်ရှင်းသန့် တောက်ပြောင်လှပ နေမှာ ပေါ့တဲ့၊ အဲ့ဒါ သူနဲ့ကျွန်မအကြား ပထမဆုံး သူ စပြောတဲ့ စကားလုံးလေးတွေပေါ့…
အရာရာကို တုံ့နှေးကွေးလွန်းသော ကျွန်မနှင့် သွက်သွက်လက်လက်ရှိလှသော သူမ၊ မြန်မာအစားအစာတွေကိုမှ ခုံမင်နှစ်သက် သော ကျွန်မနှင့် ဘိုစာကိုမှ ကြိုက်လွန်းလှသော သူမ၊ အနုပညာကို အသက်လိုတန်ဖိုးထားသော ကျွန်မနှင့် လက်တွေ့ကျမှုကို ဦးစားပေးတတ်သော သူမ၊ တကယ်တန်းတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် သွင်သွင်ကြီး ဆန့်ကျင်ကြသူများ ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ဆန့်ကျင်ဘက်များကပင် သူမသည် ကျွန်မအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာလေသလား မပြောတတ်ပေ၊ ကျွန်မ မကြိုက်တတ် ပေမယ့် သူမအကြိုက်များကို ကျွန်မအမြဲအမှတ်ရပေးတတ်သလို ကျွန်မကြိုက်တတ်သည်များကို ကြိုးစားပြီး ဂရုစိုက်ပေးတတ် သော သူမကရော သူမရင်ထဲမှာ ကျွန်မလိုပင် ရှိနေလို့လား မပြောတတ်ပေ၊
ကျွန်မ၏ အားလပ်ချိန်များတွင် ဝါသနာပါသော ပန်းချီကားများကို တိတ်ဆိတ်စွာ ရေးဆွဲတတ်သော်လည်း သူမကတော့ သူမရုံးမှ ပစ္စည်းများအတွက် အရောင်းစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲနေလေ့ရှိသည်။ တစ်ရက်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်သည်မသိ၊ ကျွန်မ ပန်းချီဆွဲနေ သည်ကို နဘေးမှ လာရပ်ကြည့်ရင်း စိတ်လိုလက်ရ မေးမြန်းစပ်စုနေပုံလေးက တကယ့်ကို ပီဘိကလေးမလေးလို ချစ်စရာ ကောင်းနေလေသည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်မရေးဆွဲနေသည်က ဘဝနေဝင်ချိန်တွေအထိ သူမနှင့် အမြဲအတူတူနေသွားရန် စိတ်ကူးနှင့် ရေးဆွဲပုံဖော်ထားသည်ကို သူမက စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းလှသည်၊ ဘဝဆိုတာ မိမိဖြစ်ချင်သည့် စိတ်ကူးအတိုင်း ဖြစ်လေ့မရှိ၊ လက်တွေ့ကျဖို့ အရေးကြီးသည်ဟုဆိုကာ ကျွန်မ၏ ခေါင်းလေးကို ပွတ်ပြီး သူမ ကုတင်ရှိရာဘက်သို့ ပြန်သွား လေသည်။ ကျွန်မ၏ စိတ်ကူးခံစားချက်များကို နားမလည်ပေးတတ်သော သူမကို အနည်းငယ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိသွား သော်လည်း ပြပွဲရက် အမှီ ပြီးအောင် ဆွဲရမည်ဖြစ်သဖြင့် ပန်းချီကားကိုသာ နှလုံးသားနှစ်ကာ ဆွဲနေမိလေသည်။
ဒီနေ့မနက် အလုပ်မသွားခင် သူမ ကျွန်မ၏ ခေါင်းလေးကို ပုတ်ကာ ဆုတောင်းပေးသွားသည်။ ကံကောင်းပါစေတဲ့၊ သူမ၏ ဆုတောင်းကြောင့်ပဲလားမသိ၊ ပြပွဲတွင် စိတ်ဝင်စားအခံရဆုံးမှာ ကျွန်မ၏ ပန်းချီကားများ ဖြစ်နေလေသည်။ ပန်းချီကားများ ရောင်းထွက်သွားသည့်အတွက် သူမကို သူမကြိုက်သော အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်က ချိစ်ပါ့ဖ်မုန့်များနှင့် ဆင်းဝှစ်မုန့်များ အဝ ဝယ်ကျွေးမည်ဟု စိတ်ကူးထားသည်။ စိတ်ကူးဖြင့် ပြုံးနေစဉ် ပန်းချီကားများကို မထိရဟု ရေးထားသည့် စာတန်းကို နားမလည် တာပဲလား မပြောတတ်သော လူတစ်ယောက် သူမ၏ တန်ဖိုးအထားရဆုံး ချစ်သူသို့ ဟူသည့် ပန်းချီကားကို ကိုင်တွယ်ရန် ကြိုးစားနေသဖြင့် လက်ကို ပုတ်ထုတ်လိုက်သော်လည်း နားလည်ရခက်လွန်းလှသော ထိုသူက ရောင်းရန်မဟုတ် ဆိုသည့် စာတန်းကိုပါ မဖတ်ပြန်ဘဲ ထိုပန်းချီကားလေးကိုမှ လိုချင်ပြန်သည်တဲ့၊ မရောင်းပါဘူးဆိုပြန်တော့လည်း တစ်စုံတစ်ယောက် အတွက် ရည်စူးရေးဆွဲထားတာလားတဲ့၊ တစ်ခုတော့ သူ့ကို ချီးကျူးမိပါသည်။ ကျွန်မရေးဆွဲထားသည့် ပန်းချီကားရဲ့ အနုပညာ ကို သူ ခံစားတတ်ခြင်းပါပဲ၊ သူ့လိုမျိုး သူမလည်း နားလည်စေချင်လိုက်တာဟု တွေးမိသွားသဖြင့် လှည့်ထွက်လာခဲ့မိသည်။
ထိုနေ့က မိုးတွေ ရွာနေလေသည်။ သူမအတွက် ဝယ်လာသော ဆင်းဝှစ်မုန့်လေးများ ပျက်စီးကုန်မည်စိုးသဖြင့် အပင်အောက် မိုးခိုရင်း တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်နေမိသည်၊ မိုးကလည်း သည်းသည်းမည်းမည်း ပိုရွာလာသဖြင့် မုန့်လေးများ ရေစိုကုန်တော့ မည်၊ စားစေချင်သောစိတ်နှင့် တကူးတကသွားဝယ်လာရသဖြင့် မိုးကိုသာ ကျိန်ဆဲနေမိတော့သည်။ ထိုစဉ် ကျွန်မကိုယ်ပေါ်တွင် ကွက်၍ မိုးတိတ်သွားသည့်အလား မိုးစက်တို့ ရုတ်တရက် ကျမလာတော့သဖြင့် မော့ကြည့်မိရာ ကျွန်မကို မိုးပေးထားသော ထီးတစ်လက်၊ ထီးပိုင်ရှင်ကား ဟိုလူ၊ ကျွန်မကို ဂရုဏာအပြည့်နှင့် ပြုံးပြီး ထီးမိုးပေးနေသည့် ထိုလူ့ကို ကျွန်မ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ၊ အားနာနေမိသည်။ ထိုလူ ကျွန်မထံမှ ဘာလိုချင်သည်ကို ကျွန်မသိနေနှင့်ပြီး ကျွန်မမပေးနိုင်တာ သေချာနေသည့်အတွက် အားနာနေမိခြင်းပင်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ထိုလူနှင့်အတူ တစ်မိုးတည်းအောက် အတူယှဉ်ကာ မလျှောက်လိုသော်လည်း သူမအတွက် ဝယ်လာသော မုန့်များ မိုးစိုပျက်စီးကုန်မည်စိုးသဖြင့် အဆောင်အထိ လိုက်ပို့သည်ကို လက်ခံလိုက်ရလေသည်။
လမ်းမှာ ကျွန်မတွေးထင်ထားသည့်အတိုင်း သူ ကျွန်မကို ချစ်ကြိုက်ကြောင်း ဖွင့်ဟပြောဆိုလေသည်။ သူ တစ်ချိန်ချိန်ပြောလာ မည်ကို သေချာသိနေသဖြင့် သူ့အတွက် အဖြေမှာလည်း အဆင်သင့်ပင် ရှိနေလေသည်။ ကျွန်မ ဒီတစ်ဘဝလုံးစာအတွက် သူ့ကို မချစ်နိုင်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်ပြီးချိန်တွင် အဆောင်ရှေ့သို့ ရောက်လာပြီဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်မလက် ထဲသို့ ထီးကို ထိုးထည့်ကာ မိုးရွာထဲသို့ ပြေးထွက်သွားသော ထိုလူ့ကျောပြင်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကာ စိတ်မကောင်းသဖြင့် သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိလေသည်။ ဘယ်လိုမှ မချစ်နိုင်တဲ့အတူတူ အခုလို ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းလိုက်တာ သူ့အတွက် ပိုကောင်းသည် မဟုတ်ပါလား။
ကျွန်မ အဆောင်အခန်းထဲရောက်တော့ မိုးစိုလာသော ကျွန်မကို တဘက်တစ်ထည်ပေးပြီး သူမ အိပ်ယာပေါ်သို့တက်ကာ စာ ဖတ်နေလေသည်၊ ကျွန်မအတွက် ကျွန်မအကြိုက် မုန့်ဟင်းခါးကို ပူပူလေး နွှေးထားပေးပြီး စားလိုက်ရန်ပြောသော်လည်း ကျွန်မ သူ့အတွက် ယူလာသော ဆင်းဝှစ်မုန့်ကိုမူ သူမ ဗိုက်မဆာသဖြင့် မစားတော့ဟု ဆိုကာ အိပ်ယာဝင်သွားလေသည်။ ကျွန်မ သူမ ပြင်ပေးထားသော မုန့်ဟင်းခါးကို မျက်ရည်အချို့နှင့်အတူ ကျိတ်မှိတ်၍ စားလိုက်ရသည်ကို သူမ မသိလေရော့သလား၊ ကျွန်မကရော သူမကို စားစေချင်တာ သူမ မသိလေရော့သလား မပြောတတ်ပေ၊ တကယ်ပင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသောညပေ။
ကျွန်မမွေးနေ့ သူမကို ဘုရားလိုက်ပို့ပေးရန် ပူဆာထားသဖြင့် ညနေတွင် သူမရုံးမှ စောစောဆင်းကာ ကျွန်မကို ကျူရှင်မှာ လာခေါ်ပြီး ဘုရားသို့ သုံးဘီးကားလေးငှားကာ သွားဖြစ်ကြလေသည်။ ဘုရားမှာ အတူတူ ပန်းကပ်လှု ဆုတောင်းပြီး သူမကို လှည့်ပြုံးပြလိုက်ရာ သူမ၏ မျက်နှာမှာ စူပုပ်ပွနေလေသည်။ ရုတ်တရက် ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိသဖြင့် ကျွန်မ တကယ်ပင် စိတ်ညစ်သွားမိသည်။ သူမကို စိတ်ဆိုးအောင် ဘာများ လုပ်မိပြန်ပြီလဲ ကျွန်မတကယ်မသိချေ၊
ကျွန်မ မျက်နှာငယ်ကာ စိတ်ညစ်နေသဖြင့် သူမ ကျွန်မကို စကားစတင်ပြောလာသည်။ “ဘာလဲ ဟိုဘဲကြီးနဲ့ ဘုရားအတူတူ မဖူးရလို့ မျက်နှာမကောင်းဖြစ်နေတာလား” သူမစကားများက ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ကျွန်မမသိသဖြင့် သူမကို ပြန်ငေးကြည့်နေမိ၊ သူမက “ဘာအူကြောင်ကြောင်လုပ်နေတာလဲ၊ ဟိုအနောက်နားမှာ ရှင့်ကို လာလာပိုးနေတဲ့ ဘဲကြီးလေ၊ အခုလည်း ရှင် သူ့ကို ဒီမှာ ချိန်းထားတာမလား၊ နေခဲ့လိုက်လေ၊ ကျွန်မပြန်နှင့်လိုက်မယ်” သူမပြောရာအရပ်သို့ မသိမသာ စွေကြည့်လိုက်ရာ ဘုရား ရှိခိုးနေသည့် ထိုလူ၊ စိတ်ပျက်စရာ၊ အပြတ်ပြောထားပြီးသားကို ဘာတွေ လိုက်ကပ်နေမှန်းမသိ၊ သူ့ကြောင့် သူမ ကျွန်မကို စိတ်ဆိုးလေပြီ၊ ဟင် ဒါဆို သူမ ကျွန်မကို ထိုလူနှင့် သဝန်တိုနေခြင်းများလား၊ ကျွန်မ အတွေးနှင့်အတူ ပျော်သွားသဖြင့် မျက်နှာ ပြုံးရိပ်သန်းသွားလေသည်ကို ကြည့်ပြီး သူမ လှစ်ကနဲဘေးမှ ထထွက်သွားလေပြီ၊ ကျွန်မလည်း သူမ နဘေးမှ အသည်းအသန် ပြေးလိုက်ကာ လိုက်ချော့ရတော့သည်။
သူမက အပြန်အဆောင်ကို ကားငှားမပြန်ဘဲ လမ်းလျှောက်ပြန်ရင်း စကားပြောချင်သည်ဟုဆိုသဖြင့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် လမ်းအတူလျှောက်ကာ စကားပြောမိကြသည်။ ထိုအခါမှပင် ကျွန်မကိုလည်း သူမ ချစ်နေကြောင်း သိခဲ့ရလေသည်။ ကျွန်မလေ ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်မဘဝမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ရလိုက်သလိုပင်၊ သူမက ဟိုနေ့က မိုးရေထဲမှာ ထီး တစ်ချောင်းတည်း အတူဆောင်းလာတာ မြင်လိုက်ရသဖြင့် ရင်ထဲ ပူလောင်လှကြောင်းပြောရာ ကျွန်မ ထိုညကပင် ထိုသူ့ကို အပြတ်ငြင်းလိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ငြင်းလိုက်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာလည်း ကျွန်မရင်ထဲမှာ ရှိနေသူမှာ သူမဖြစ်နေလို့ပင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်ရာ သူမ လမ်းလျှောက်နေရာမှ ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်ပြီး ကျွန်မလက်မောင်းကို ဆွဲလိုက်လေသည်။ ကျွန်မ လရောင်၏ ဖမ်းစားမှုအောက်တွင် မှတ်မိလိုက်သည်က သူမ၏ နဖူးလေးမှသည် နှုတ်ခမ်းအစုံဆီသို့ ကျွန်မ၏ အနမ်းမိုး တို့ စွေရွာမိသည်ကိုပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်မတို့၏ ချစ်သူကာလသည် ပျော်ရွှင်စရာလည်း ကောင်းသလို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်း ကောင်းလှသည်။ အဆောင်မှ အခြားလူများ မသိအောင် မရိပ်မိအောင် အနေအထိုင် သိုသိပ်ပိရိရသည်မှာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာ တစ်မျိုးကောင်းလှသည်။ ကျွန်မတို့၏ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ချစ်သူဘဝထဲ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ ကိစ္စကြုံလာရသည်ကား နယ်မှ ကျွန်မ မိဘများထံမှ စာတစ်စောင် ရောက်လာချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ တော်ရုံ အသိမပေးတတ်သော မိဘများက အတော်ပင် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသဖြင့်သာ စာရေးအကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ရေကြီးသဖြင့် စပါးသီးနှံများ ပျက်စီးရသလို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အငယ်ကောင်၏ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပြင်းနှင့် မိခင်၏ ရင်ကြပ်ပန်းနာရောဂါဆိုးရွားချိန်တို့ တပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်နေကြ သဖြင့် ငွေလိုအပ်ကြောင်း ပြောလာချိန်တွင် ကျွန်မလက်ထဲ ငွေ ၁၀၀ ပင် မပြည့်တတ်၊ စာ၏ အဆုံးသတ်တွင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားရန်နှင့် ငွေကြေးပြည့်စုံသော ရွာမှ စပါးပွဲစားကိုသာအောင် သို့မဟုတ်လျှင်လည်း မြို့မှာ ချစ်သူရည်းစားရှိပါက အားကိုး အားထားပြုနိုင်ရန် အိမ်ထောင်စဉ်းစားဖို့ပါ တိုက်တွန်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်ကတော့ အိမ်၏ ငွေကြေးအခက်အခဲကို အမကြီး အမိရာ ကျွန်မကပင် ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် အိမ်ထောင်ဘက်အကူအညီလိုအပ်ပါက ယူရန်အထိ အရိပ်ပြထားလေပြီ။
ထိုစာရလာပြီးချိန်မှစ၍ သူမ ကျွန်မအပေါ် အနည်းငယ် ရှောင်ဖယ်လာပြီး နောက်နေ့ညနေတွင်ပင် သူမ ကျွန်မကို ထုတ်ဖော် ပြောလာသည်က မိသားစုအရေးအတွက် ကိုလွင်မောင်ဆိုသူကို စဉ်းစားသင့်ကြောင်း သူမ နားလည်နိုင်ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မ သည်းထန်စွာ ငိုကြွေးမိတော့သည်။ ကျွန်မ လက်ထဲမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားသော သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေး ကို သူမလက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်ပြီး သူမဖတ်ကြည့်ပြီးချိန်တွင် ကျွန်မကိုဖက်ကာ သူမပါ အူလှိုက်သည်းဖို ငိုလေတော့သည်။
ထိုသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးတွင် ကျွန်မ သူမကို ဘယ်လောက်အထိ ချစ်မိကြောင်း ဖော်ပြနိုင်သည်မဟုတ်ပါလား.. ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မထက်ပင် သူမကို နက်ရှိုင်းစွာချစ်မိသွားသည်လေ။ ဤသို့ချစ်ရပါသော…..
To be continue.. ..........
Posted by Alex Aung at 4:12 PM No comments: